ghrelin ၏စားနပ်ရိက္ခာဆုနှင့်စားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အခြေခံကွဲပြားခြားနားသောအချက်များ - dopaminergic VTA-accumbens projection သည် ghrelin ၏အစားအစာဆုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ သို့သော်အစားအစာစားခြင်းမဟုတ်ပါ။ (2013) - Your Brain On Porn
Neuropharmacology ။ 2013 အောက်တိုဘာ; 73: 274-83 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2013.06.004 ။ EPub 2013 ဇွန် 14 ။
Skibicka KP1, တစ်ခါ RH အ, Rabasa-Papio ကို C, Alvarez-Crespo M က, Neuber ကို C, Vogel H ကို, Dickson SL.
အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ghrelin accumbal D1 နှင့် D2 receptors ပါဝငျ
အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ accumbal D1 နှင့် D2 receptors ကနေတဆင့်အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူ elevates
အစားအသောက်စားသုံးမှု accumbal D1 နှင့် D2 ထိန်းသိမ်းရေးအားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်အပြုအမူနဲ့ရိုးရိုး Chow စားသုံးမှုမတူကွဲပြား circuitry ကထိန်းချုပ်ထားရသည်။
NAc dopamine အစားအစာဆုလာဘ်အတွက်မဟုတ်ဘဲအစားအစာစားသုံးမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
အဝလွန်ခြင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအချိုးအစားရောက်ရှိနေပြီနှင့်အလွန်အကျွံနှင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့အစားအစာစားသုံးမှုအခြေခံယန္တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ကိုသိရပါတယ်။ Ghrelin, တစ်ခုတည်းသောလူသိများပျံ့နှံ့နေတဲ့ orexigenic ဟော်မုန်း, အစွမ်းထက်အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါ mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်နှင့်တိုးမြှင့်အစားအစာကိုဆုလာဘ်အပြုအမူမှ ghrelin ဆက်သွယ်သော neurochemical circuitry မသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ VTA-NAc dopaminergic အချက်ပြအစားအစာဆုလာဘ်များနှင့်စားသုံးမှုအပေါ် ghrelin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘို့လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ VTA-NAc dopamine အာရုံခံအပေါ်သရုပ်ဆောင် endogenous ghrelin များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်။ တစ်ဦးကနဲ့တူ D1-တစ်ခုသို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ရန်ဒီပိတ်ဆို့ ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူ attenuates ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ VTA သို့ ghrelin microinjection နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက် NAc သို့ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ sucrose-သွေးဆောင်တိုးတက်သောအချိုးအော်ပရေတာအေးစက်နှင့် Chow စားသုံးမှုဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် ghrelin ၏ VTA ထိုး, အစားအစာလှုံ့ဆျောမှု / ဆုလာဘ်အပြုအမူအတွက်သိသိသာသာတိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ NAc သို့ D1 ကဲ့သို့သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်စေနှင့်အတူ Pretreatment, လုံးဝနဂိုအတိုင်း Chow စားသုံးမှုထွက်ခွာ ghrelin ၏အကျိုးကိုသက်ရောက်ပိတ်ဆို့။ ငါတို့သည်လည်းဒီ circuit ကိုအစာရှောင်ခြင်း (ghrelin မြင့်မားပျံ့နှံ့နေတဲ့အဆင့်ဆင့်၏ပြည်နယ်) sucrose-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူသို့ခြီးမွှောကျပေမယ့် hyperphagia Chow မဟုတ်လျှော့ချနှစ်ဦးစလုံးရန်အဖြစ် endogenously ဖြန့်ချိ ghrelin ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အလားအလာသက်ဆိုင်ရာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အတူတူယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာအစားအစာကိုဆုလာဘ်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သည့် ghrelin တုံ့ပြန်မှုဆားကစ်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်သည်အတိုင်း, NAc အတွက် D1 တူသောနှင့် D2 receptors အတူ NAc dopaminergic စီမံချက်များဖို့ VTA ခွဲခြားသတ်မှတ်။ စိတ်ဝင်စားစရာလည်းအစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့် Chow ၏ရိုးရှင်းစားသုံးမှု NAc dopamine အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်အစားအစာဆုလာဘ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသော်လည်းမဘယ်မှာမတူကွဲပြား circuitry ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုအကြံပြုရလဒ်များ။
အဆိုပါပျံ့နှံ့နေတဲ့ဟော်မုန်း ghrelin ကြောင့်ကောင်းစွာအဝလွန်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ် (များ၏အခြေအနေတွင်သုတေသနပြုနေကြသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာကနေတဆင့်အာရုံကြောဆားကစ်Skibicka နှင့် Dickson, 2011), ဤရောဂါဧရိယာ၌ကုထုံးအခွင့်အလမ်းများအားဖြင့်လည်းလှုံ့ဆော် (Cardona Cano et al ။ , 2012) ။ ဒါကြောင့်အစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွါးကြောင်းအတွက် Ghrelin (ထိုပျံ့နှံ့နေတဲ့အူ peptides အကြားထူးခြားသောဖြစ်ပါသည်Wren et al ။ , 2000, Inui, 2001, Shintani et al ။ , 2001 နှင့် Kojima နှင့် Kangawa, 2002) ဆက်ကပ်အပ်နှံ receptors ကကမကထပြုခဲ့တဲ့ CNS အကျိုးသက်ရောက်မှု, GHS-R1A (Salome et al ။ , 2009 နှင့် Skibicka et al ။ , 2011"homeostatic နို့တိုက်ကျွေးရေး" တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်တည်ရှိသော) အထူးသသူတို့အား (ဆိုလိုသည်မှာစွမ်းအင်လိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်နို့တိုက်ကျွေးမှု), အ hypothalamus နှင့် brainstem (Melis et al ။ , 2002, Faulconbridge et al ။ , 2003 နှင့် Olszewski et al ။ , 2003) ။ မကြာသေးမီကသို့သော်ဤ homeostatic ဒေသအပြင်ဘက် ghrelin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ GHS-R1A ထိုကဲ့သို့သော ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) (အဖြစ်ဒေသများအတွက်ကိုလည်း mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏အဓိကသော့ချက် node များအတွက်လက်ရှိဖြစ်ပါသည်Zigman et al ။ , 2006 နှင့် Skibicka et al ။ , 2011), အစ "hedonic နို့တိုက်ကျွေးရေး" သည်၎င်း၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများမှ coupled (ဆိုလိုသည်မှာအစားအစာစားသုံးမှု) နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများ။ Ghrelin (ဤဆိုဒ်များနှစ်ခုစလုံးကနေအစားအစာစားသုံးမှုကိုမောင်းနိုင်နှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ဖွယ်အစားအစာများ၏မက်လုံးပေးခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့က၎င်း၏အရေးယူဆက်စပ်နေသည်Naleid et al ။ , 2005, Abizaid et al ။ , 2006 နှင့် Skibicka et al ။ , 2011) ။ ထို့ကြောင့်အပြည့်အဝ satiated ကြွက်သို့မဟုတ်ကြွက်အတွက် ghrelin ကို (VTA သို့တိုက်ရိုက်အပါအဝင်) Peripheral သို့မဟုတ်ဗဟိုလျှောက်ထား (တစ်ခုတိုးလာအစားအစာစားသုံးမှုနှင့်လည်းအစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူမှဦးဆောင်Naleid et al ။ , 2005, Perello et al ။ , 2010, Skibicka et al ။ , 2011 နှင့် Skibicka et al ။ , 2012b) ရောင်ပြန်ဟပ်ဥပမာ, တိုးမြှင့လီဗာ-နှိပ်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအော်ပရေတာအချိန်ဇယားထဲမှာသကြားအကျိုးသည်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤ action (စားစရာဘို့ဒါပေမယ့်လည်းအလွဲသုံးစားမှုအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးအဘို့မသာ, ဆုလာဘ်အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်အတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်သည့်စနစ်အတွင်း ghrelin တစ်ခုထွန်းသစ်စအခန်းကဏ္ဍထင်ဟပ်Dickson et al ။ , 2011) ။ Over-စီးအစားအစာလှုံ့ဆျောမှုအပေါ် ghrelin ၏အရေးကြီး, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမွတ်မပြေနိုင်သောအချက်ပြ, ghrelin အစားအစာ-ဆုံးရှုံးကြွက်များတွင်တွေ့ရှိကြောင်းနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအဆင့်အထိ satiated တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူ elicits အဖြစ်။ အဆိုပါ ghrelin signal ကို၏ထို့ပြင်တကယ်တော့ကြောင်းပိတ်ဆို့ထားခြင်း, မသာစနစ်တကျဒါပေမယ့်လည်းရွေးချယ်သည့် VTA အတွင်း (Skibicka et al ။ , 2011), အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူတစ်ခုအစွမ်းထက်ဖိနှိပ်မှုအတွက်ရလဒ်တွေကိုအစားအစာဆုလာဘ်အတွက် ghrelin signal ကို၏အရေးပါမှုနှင့်လိုအပ်ချက်အလေးပေး။
အဆိုပါ VTA များ၏အဆင့်မှာ Ghrelin အရေးယူ GHS-R1A (မှတဆင့်ပြလိုအပ်မှပေါ်လာသောသက်ရောက်မှု, အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူမောင်းထုတ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်Abizaid et al ။ , 2006 နှင့် Skibicka et al ။ , 2011) ။ အံ့သြစရာကောင်းတာက Ghrelin ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်မှုများ၏မြစ်အောက်ပိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်သည်အကြီးအကျယ်မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါ။ VTA အတွင်းတွင် ghrelin သည် opioid, NPY နှင့် GABAergic အချက်ပြခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။Abizaid et al ။ , 2006 နှင့် Skibicka et al ။ , 2012a) ။ ghrelin receptors ဖော်ပြယခင်ကပြသမည်သို့ပင်ဆိုစေ, VTA dopamine အာရုံခံ, (Abizaid et al ။ , 2006), Ghrelin ၏အစားအစာဆုလာဘ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်နောက်ဆုံး VTA ပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အရသာရှိသော / အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအစားအစာများသည် VTA dopamine neuron နှင့် dopamine signal များကို CNS ကဲ့သို့သောရွေးချယ်ထားသော CNS ဒေသများရှိထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်အစားအစာဆုိုင်ရာအပြုအမူကိုလှုံ့ဆော်သည်။ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988 နှင့် ယောသပ်နှင့် Hodges, 1990) ။ ဒါဟာ (dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စားစရာဘို့လှုံ့ဆော်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ပေမယ့်, ကငတ်မွတ်ခေါင်းပါး၏ dopamine သေ synthesize နိုင်ခြင်းနေသောကြွက်အဖြစ်အခြေခံနို့တိုက်ကျွေးရေးအတွက်လည်းလိုအပ်သောကြောင်း, သို့သော်, မှတ်သားရပါမည်Cannon et al ။ , 2004) ။ ghrelin နှင့် dopamine အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုကို ghrelin ၏ VTA dopamine neuron လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အစားအစာဆုကို ghrelin ၏သက်ရောက်မှုအတွက်နဂိုအတိုင်း VTA dopaminergic neuron များလိုအပ်သည်ဟူသောအချက်အားအကြံပြုသည် (Abizaid et al ။ , 2006 နှင့် Weinberg et al ။ , 2011) ။ သို့သော်ဆိုဒ်များတစ်အရေအတွက်သည် VTA dopamine အာရုံခံစီမံကိန်းနှင့်က NAc အတွက် dopamine အချက်ပြအစားအစာ-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ် ghrelin ၏ VTA-မောင်းနှင်သက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်ရှိမရှိလုံးဝ unexplored နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပွငျ ghrelin ကိုလည်း NAc (ထဲမှာ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြရသောအစားအစာစားသုံးမှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆျောမှုထက်အခြားအပြုအမူတွေ၏ထိန်းချုပ်မှု, အမည်ရအသစ်အဆန်း-ရှာတှငျပါဝငျBardo et al ။ , 1996 နှင့် Hansson et al ။ , 2012).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူနှင့် / သို့မဟုတ်အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ် ghrelin များ၏သက်ရောက်မှုများ VTA များ၏အဆင့်မှာကြိုးပမ်းခဲ့တယ်သောယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်သည့် NAc အတွက်အချက်ပြ dopamine အဲဒီ receptor လိုအပ်သည်။ ဒီအဆုံး, VTA ghrelin အားဖြင့်သွေးဆောင်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်စားနပ်ရိက္ခာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက်တိုးတက်သောအချိုးလီဗာ-နှိပ် sucrose ပါရာဒိုင်းအဘို့ပိတ်ဆို့အချက်ပြတစ်ပြိုင်နက် NAc dopamine နှင့်အတူအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ သီးခြားလေ့လာမှုများငါတို့သည် receptors နှင့် dopamine 1 receptors (D1) ကဲ့သို့သော dopamine2(D2) ၏တစ်ဦးချင်းစီအလှူငွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ထို့ပြင် NAc dopamine signal ကိုမှ endogenous ghrelin များ၏အလှူငွေစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ကဤ dopamine receptors အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူ၏ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု-မောင်းနှင်တိုးမြှင့်အတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ NAc dopamine အချက်ပြအတွက် endogenously ခြီးမွှောကျ ghrelin ၏မော်လီကျူးအကျိုးဆက်များအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ NAc dopamine receptors နှင့်အင်ဇိုင်းတွေ၏ mRNA စကားရပ်အပေါ်ဆာလောင်မွတ်သိပ် / အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။
တိရစ္ဆာန်များ- အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sprague-Dawley ကြွက်များကို (၂၀၀၂-၂၅၀ ဂရမ်၊ Charles River, ဂျာမနီ) ၁၂ နာရီအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာတွင် (နံနက် ၆ နာရီတွင်မီးအိမ်များ) ပုံမှန်မီးနှင့်ရေရှိနိုင်သည်။ ကြော်ငြာ libitum သူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ။ အားလုံးတိရစ္ဆာန်အလုပျထုံးလုပျနညျးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနှင့်တက္ကသိုလ်ဂို၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း: အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှကြွက်များအားလုံးသည်နောက်တစ်ဖက်သတ် ipsilateral ထိုးဆေးများအတွက် VTA နှင့် NAc အခွံကိုပစ်မှတ်ထားသော ၂၆ gauge; Plastics One, Roanoke, VA သို့လမ်းညွှန်ဆေးခြောက်နှင့်ထည့်သွင်းထားသည်။ Ketamine မေ့ဆေးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြံများကိုနေရာမှအထက် ၁.၅ မီလီမီတာနေရာချကာလမ်းညွှန်ဆေးခြောက်များမှ ၁.၅ မီလီမီတာအထိတိုးမြှင့်သောဆေးထိုးကို microinjections အတွက်အသုံးပြုသည်။ VTA ကိုပစ်မှတ်ထားရန်အောက်ပါကိုသြဒီနိတ်များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် Skibicka et al ။ (၂၀၁၁): ဦး ခေါင်းခွံမှ 0.75 မီလီမီတာ ventral ရည်ရွယ်နှင့်အတူ: အလယ်တန်းကနေ± 5.7, bregma မှ 6.5 မီလီမီတာ posterior နှင့် ဦး ခေါင်းခွံ၏မျက်နှာပြင်ကနေ 8.0 မီလီမီတာ ventral ။ NAc shell အတွက်၊ အောက်ပါကိုသြဒီနိတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (မှပြုပြင်ထားသည်) Quarta et al ။ (၂၀၀၉): ± 0.75 အလယ်တန်းကနေ± 1.7 မီလီမီတာ ventral ရည်ရွယ်နှင့်အတူ ဦး ခေါင်းခွံမှ 6.0 မီလီမီတာ anterior bregma နှင့် 7.5 မီလီမီတာ ventral) ။ Cannulae များကိုသွားဖုံး acrylic ဘိလပ်မြေနှင့်ရတနာ၏ screw နှစ်ခုတို့ဖြင့် ဦး ခေါင်းခွံတွင်ချိတ်ထားပြီး obturator ဖြင့်ပိတ်ထားခဲ့သည် (ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း)Skibicka et al ။ , 2009) ။ ကြွက်အားလုံးတွင် VTA နှင့် NAc နှစ်မျိုးလုံးအတွက် microinjection site ကို india-ink ၏ microinjection (0.5 μl) တူညီသောလေ့လာမှုတွင်လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့် post mortem အတည်ပြုခဲ့သည်။ မှန်ကန်သောနေရာချထားသည့်ဘာသာရပ်များသာ (ပုံ။ ၁) က data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
အသုံးပြုသွားမည်ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကိုယ်စားပြုကားချပ်။ ဇယား 1 အတွက်တင်ပြ data တွေကိုရယူအသုံးပြုခဲ့သည် သင်္ဘောသဖန်းသီး။ ၃ နှင့် 4။ ဇယား2အတွက်တင်ပြ data တွေကိုရယူအသုံးပြုခဲ့သည် ပုံ။ ၁ နှင့်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ဒေတာအတွက်3အချိန်စာရင်း သင်္ဘောသဖန်းသီး။ ၃ နှင့် 7။ အဆိုပါအစိုင်အခဲမီးခိုးရောင် boxes တွေကိုတိုင်းတာစုဆောင်းခဲ့ကြသည့်အခါကာလကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ကိုယ်စားလှယ် NAc (A) နှင့် VTA (B) ဆေးထိုးသည့်နေရာ (စက်ဝိုင်းဖြင့်ညွှန်ပြသည်) ။ ညာဘက် panel ကလေ့လာမှုမှာ 0.5 2.16 μlအသံအတိုးအကျယ်မှာ VTA သို့မဟုတ် NAc shell ကို (NAcS) သို့ microinjected india-ink နှင့်အတူ coronal ကြွက် ဦး နှောက်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဘယ်ဘက် panel မှသက်ဆိုင်ရာကြွက် ဦး နှောက် Atlas အပိုင်း, 5.64 mm NAC အတွက် bregma မှ anterior နှင့် VTA များအတွက် bregma မှ XNUMX posterior ပြသ; Aq, ငါးမွေးမြူရေး; cc, corpus collosum; CPu, caudate နှင့် putamen; LV, နှစ် ဦး နှစ်ဖက် ventricle; NAcC, NAc core ကို; SN, substantia nigra ။
2.1 ။ အော်ပရေတာအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
Operant အေးစက်စမ်းသပ်မှုများသည်ကြွက် operant အေးစက်ခန်းများ (၃၀.၅ × ၂၄.၁ ၂၁.၁ စင်တီမီတာ; Med-Associates, Georgia, VT, USA) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ operant အေးစက်များအတွက်အသုံးပြုလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းယခင်လေ့လာမှုများမှအဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည် (la Fleur et al ။ , 2007 နှင့် Hansson et al ။ , 2012) ။ sucrose အတွက်အော်ပရေတာလေ့ကျင့်ရေးကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကြွက်များအားလုံးသည်တစ်ပတ်တာကာလအတွင်းသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်း ၉၀% အထိလျှော့ချပေးသောအစားအစာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အော်ပရေတာသေတ္တာများထဲသို့မ ၀ င်ခင်ကြွက်များကိုအိမ်ထောင်လှောင်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ် (sucrose pellets (၄၅ မီလီဂရမ် sucrose လုံးလေးများ; test Diet, Richmond, IN, USA) နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကြွက်များသည်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်စီပါ ၀ င်သောသတ်မှတ်ထားသောအချိုးအစား FR90 အချိန်ဇယားအရ sucrose pellets ကိုဖိအားပေးရန်သင်ယူခဲ့သည်။ FR45 တွင်၊ တက်ကြွသောလီဗာပေါ်ရှိစာနယ်ဇင်းတစ်ခုက sucrose pellet တစ်ခုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ FR သင်တန်းများအားလုံးသည်မိနစ် ၃၀ ခန့်ကြာသည်သို့မဟုတ်ကြွက်များသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည့်တောင့်သည် ၅၀ ရရှိသည်အထိဖြစ်သည်။ ကြွက်အများစုသည် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အကြာတွင်တစ်ကြိမ်လျှင်အလုံး ၅၀ ရရှိသည်။ မလှုပ်မရှားလီဗာပေါ်ရှိဖိအားများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ FR1 အချိန်ဇယားကို FR2 နှင့် FR1 (ဆိုလိုသည်မှာလုံးလေးတစ်လုံးလျှင် ၃ ပုံနှင့် ၅ ပုံနှိပ်စက်) အသီးသီးလိုက်သည်။ FR30 အချိန်ဇယားကို လိုက်၍ တိုးတက်သောအချိုးအစား (PR) အချိန်ဇယားဖြင့်နောက်ဆုလာဘ်တစ်ခုစီအတွက်အကျိုးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ပေးသောကြွက်များကထိုဆုကိုရရှိရန်ဆန္ဒရှိရန်ကြွက်ကလိုလားသောအလုပ်ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါညီမျှခြင်းအရတုန့်ပြန်မှုလိုအပ်ချက်မှာတိုးလာသည်။ response ratio = (50e (50 × infusion number)) - အောက်ပါစီးရီးများမှ ၅ - ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၄၀၊ ၅၀ ၁၃၅၊ ၁၁၈၊ ၁၄၅၊ ၁၇၈၊ ၂၁၉၊ ၂၆၈၊ ၃၂၈။ ကြွက်များသည်မိနစ် ၆၀ အတွင်းဆုလာဘ်ရရှိရန်ပျက်ကွက်သောအခါ PR စနစ်သည်အဆုံးသတ်သွားသည်။ အစည်းအဝေးတစ်ခုစီ၌ရရှိသောအစားအစာလုံးလေးများအရေအတွက်သည်သုံးကြိမ်ဆက်တိုက်အတွက် ၁၅% ထက်မပိုသောအခါတုန့်ပြန်မှုသည်တည်ငြိမ်သည်ဟုယူဆသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်တုံ့ပြန်5အစည်းအဝေးများအတွင်းတည်ငြိမ်။ လိုအပ်သောသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတိုင်းအတာကိုမပြည့်မီသောကြွက်များကို ထပ်မံ၍ လေ့ကျင့်ရန်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ PR စစ်ဆေးမှုကိုတစ်ရက်လျှင် ၁ ကြိမ်ပြုလုပ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကြွက်များကိုသူတို့၏အိမ်အိတ်များသို့ ၁ နာရီခန့်စားသုံးရန်တိုင်းတာခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်မှုအပြီးတွင်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုလုပ်မီကြွက်များရှိခဲ့သည် ကြော်ငြာ libitum ပုံမှန် Chow မှဝင်ရောက်ခွင့်။
Acylated ကြွက် grrelin (Tocris, Bristol, UK) ကို VTA သို့ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ၁.၀ μgဆေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော cerebrospinal fluid အရည် (aCSF) ကိုမော်တော်ယာဉ် (နှင့်ထိန်းချုပ်မှု) အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။ ၁.၀ μgre ghrelin ပမာဏသည်ယခင်ကသကြားဓာတ်ကိုတုန့်ပြန်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး VTA သို့ပေးပို့သောအခါ orexigenic တုန့်ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။Naleid et al ။ , 2005 နှင့် Skibicka et al ။ , 2011) ။ D1 ကဲ့သို့သော receptor antagonist, SCH-23390, aCSF သည်မော်တော်ယာဉ် (ထိန်းချုပ်မှု) အနေဖြင့် ၀.၃ μg (Tocris) ပမာဏဖြင့် NAc သို့အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အစားအစာချို့တဲ့ခြင်းလေ့လာမှုအတွက်မူမူလ ၀.၃ μgဆေးပမာဏ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ၀.၅ μgသို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ SCH-0.3 သည် D0.5 ကဲ့သို့ dopamine receptors နှင့် D0.3 ကဲ့သို့သော D23390 ကဲ့သို့ dopamine receptors ၏ 1 ဆဆချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသော Dagon ကဲ့သို့သောရန်သူဖြစ်သည် (ဘား et al ။ , 1986) ။ ဒါဟာ (D1 နှင့် D5 receptors များအတွက်အလားတူဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်ဘား et al ။ , 1992) ဤအရပ်မှလေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည် D1 နှင့်တူသော receptor များကိုပိတ်ဆို့ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်းမည်ဖြစ်ပြီး D1 နှင့် D5 receptors နှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။ ကန ဦး ၀.၃ μμgဆေးပမာဏ SCH-0.3 ကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။Grimm et al ။ , 2011) ။ NAc ၏အခွံထဲသို့ထိုးသွင်းလိုက်သောဤဆေးသည်မသန်စွမ်းသောလီဗာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်မှုမရှိဘဲယခင်က sucrose solution ကိုဖြန့်ဝေပေးသော cue ကိုနှိပ်ခြင်းအတွက်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ dopamine D2 receptor antagonist eticlopride hydrochloride (Tocris) ကို NAc သို့မော်တော်ယာဉ် (ထိန်းချုပ်မှု) အဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ရှေးခယျြထားသော eticlopride (1.0 μg) ၏ကန ဦး ဆေးထိုးသည် (အပေါ်အခြေခံသည်)Laviolette et al ။ , 2008) ဒါပေမယ့်အစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့လေ့လာမှုမှာ 1.5 μgမှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အားလုံးဆေးဝါးများ aCSF ၏ 0.5 μlအသံအတိုးအကျယ်အတွက်ကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။
ကြွက်များအားလုံးသည် NAc နှင့် VTA ကိုအလင်းသံသရာအစောပိုင်းတွင်ထိုးဆေး ထိုး၍ ဒုတိယစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် operant test မစတင်မှီ ၁၀ မိနစ်တွင်ဆေးထိုးသည်။ အခြေအနေအားလုံးကိုအခြေအနေအနည်းဆုံး ၄၈ နာရီခွဲခြားပြီးဟန်ချက်ညီစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကြွက်တစ်ကောင်စီသည်အခြေအနေ ၄ ခုစလုံးကိုရရှိသည်။ ပထမ NAC အတွက်မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် dopamine receptor ရန်လိုပြီး ၁၀ မိနစ်အကြာတွင် VTA သို့ကားသို့မဟုတ် grrelin ဖြစ်သည်။ ကြွက်တစ်ခုစီအတွက် ipsilateral VTA နှင့် NAc ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှု၏အသေးစိတျကိုလည်းရုပ်ပြနေကြသည် ပုံ။ ၁.
2.3.1 ။ ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်များနှင့် Chow စားသုံးမှုအပေါ် D1 တူသောအဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
တုံ့ပြန်ချက် (ပစ်မှတ်ထား VTA နှင့် NAc ပြီးနောက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်n အောက်ပါအတိုင်းလေးအခြေအနေများပြီးနောက် = 12-14) မူးယစ်ဆေးဝါးပေးပို့: 1) ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ (အ NAc နှင့် VTA မှမော်တော်ယာဉ်ဖြေရှင်းချက်), 2) NAc မော်တော်ယာဉ် + VTA 1.0 μg ghrelin, 3) NAc 0.3 μg SCH-23390 + VTA မော်တော်ယာဉ်,4) NAc 0.3 μg SCH-23390 + VTA 1.0 μg ghrelin ။ စမ်းသပ်ခြင်း (အစာကျွေးခြင်း၏မှောင်မိုက်သံသရာကာလပြီးနောက်) စမ်းသပ်ခြင်းဟာ satiated ပြည်နယ်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ကာလများတွင်ကြွက်များအားမိနစ် ၁၂၀ ကြာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်မှအိမ်ပြန်လှောင်အိမ်များကိုပြန်ပို့ပြီးအိမ်လှောင်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင် (၁ နာရီ) တွင် chow စားသုံးမှုကိုတိုင်းတာသည်။ (ဇယား ၁ တွင်ကဲ့သို့) ပုံ။ ၁) ။ ဤအချိန်အမှတ် ghrelin ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏အချိန်သင်တန်းရှာဖွေစူးစမ်းယခင်လေ့လာမှုများ, ဗဟိုသို့မဟုတ် Peripheral အုပ်ချုပ်ခွင့် (အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး orexigenic တုံ့ပြန်မှုကိုဆက်လက်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်လို့ထားတဲ့ကာလအတွင်း VTA ghrelin ဆေးထိုး, ပြီးနောက်တတိယနာရီမှကိုက်ညီ Wren et al ။ , 2000 နှင့် Faulconbridge et al ။ , 2003) နှင့်အလားတူစမ်းသပ် setup ကိုအသုံးပြုသွားမည်သောငါတို့ယခင်လေ့လာမှုများ။
2.3.2 ။ ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်များနှင့် Chow စားသုံးမှုအပေါ် D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
တုံ့ပြန်ချက် (ပစ်မှတ်ထား VTA နှင့် NAc ပြီးနောက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်n အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း = 7) မူးယစ်ဆေးဝါးပေးပို့အောက်ပါအတိုင်း: 1) ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ (အ NAc နှင့် VTA မှမော်တော်ယာဉ်ဖြေရှင်းချက်), 2) NAc မော်တော်ယာဉ် + VTA 1.0 μg ghrelin, 3) NAc 1 μg eticlopride ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် + VTA မော်တော်ယာဉ်, 4) NAc 1 μg eticlopride hydrochloride + VTA 1.0 μg ghrelin ။ စမ်းသပ်ခြင်း (အစာကျွေးခြင်း၏မှောင်မိုက်သံသရာကာလပြီးနောက်) စမ်းသပ်ခြင်းဟာ satiated ပြည်နယ်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အိမ်တွင်းလှောင်အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် ၁ နာရီအတွင်း chant စားသုံးမှုကို ၁၂၀ မိနစ်အကြာတွင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ကြွက်များကိုသူတို့၏အိမ်အိတ်များသို့ပြန်ပို့ခဲ့သည် (ဇယား ၁ တွင်ကဲ့သို့) ပုံ။ ၁ghrelin-mediated orexigenic အကျိုးသက်ရောက်မှု (2 ဇပြီးနောက်) chow လုံးလေးများတစ် ဦး နှောင့်နှေးနေရာချထားပြီးနောက်နေဆဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သကဲ့သို့။
2.3.3 ။ တစ်ဦးတည်း ghrelin-သွေးဆောင် Chow စားသုံးမှုအပေါ်တူသော D1-နှင့် (သီးခြားသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်) D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ
ယခင်စမ်းသပ်မှုများတွင် chow စားသုံးမှုအပေါ်ရရှိသောရလဒ်များကို operant ပါရာဒိုင်းတွင်တွေ့ရှိရသည့် sucrose နှင့် ၂ နာရီကြာနှောင့်နှေးမှုတို့ကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်သီးခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ NAc ပေးပို့ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ် VTA ghrelin- သွေးဆောင်2နှင့်2ဇအဟာရကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်နှစ်ခု dopamine အဲဒီ receptor ရန်။n = 10-11; အချိန်ဇယား -၂ တွင်ရှိသကဲ့သို့, ပုံ။ ၁) ။ ဤကိစ္စတွင်ကြွက်မတိုင်မီ chow တိုင်းတာခြင်းဖို့ operant အေးစက်ပါရာဒိုင်းထိတွေ့မခံခဲ့ရပါ။ ထို့ကြောင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုအောက်ပါအခြေအနေများမှအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားသော VTA နှင့် NAc မူးယစ်ဆေးဝါးများပေးပို့ပြီးနောက်တိုင်းတာသည် - ၁) ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ (NAc နှင့် VTA မှမော်တော်ယာဉ်ဖြေရှင်းနည်းများ)၊ ၂) NAc မော်တော်ယာဉ် + VTA ၁.၀ ဂရမ်ဂလင်း၊ ၃) NAc dopamine receptor antagonist + VTA မော်တော်ယာဉ်, 1) NAc dopamine အဲဒီ receptor ရန် + VTA2μg ghrelin ။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည် dopamine receptor antagonists နှစ်ခုကိုသီးခြားစီစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ အခြေအနေများ ၃ နှင့် ၄ တွင်ကြွက်တစ်စုသည် ၀.၃ μg SCH-1.0 ကိုလက်ခံရရှိပြီးအခြားအဖွဲ့သည် ၁ μg eticlopride hydrochloride ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၃ ရက်ကြာပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီမှကြွက်များ၏ထက်ဝက်ခန့်ကိုပြန်လည်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤအချိန်သည်ရန်သူနှစ် ဦး နှင့်အခြေအနေများ ၃ နှင့် ၄ တွင်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှု ၃ ခုအနက်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကုသမှုအကြားတွင်မျှတသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဘာသာရပ်နှိုင်းယှဉ်အတွင်းအဘို့အသီးအသီးစမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုအခြေအနေများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ cannulae ၏အနေအထားကိုယခင်ကအဖြစ်အသွားအပြန်အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ပြသထားသည့်အချက်အလက်များတွင် VTA နှင့် NAc သို့ရောက်ရှိရန်အတည်ပြုထားသောဆေးထိုးထားသည့်ကြွက်များသာပါဝင်သည်။
2.3.4 ။ အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်များနှင့် Chow စားသုံးမှုအပေါ် D1 တူသောနှင့် D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အဆိုပါ dopamine အဲဒီ receptor ရန်2ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှုများတွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်တုံ့ပြန်မှု (ပစ်မှတ်ထား NAc ပြီးနောက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်n = 20) မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် D1 ကဲ့သို့အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်စေ (0.5 μg SCH-23390) ဖြစ်စေ၏ပေးပို့။ စမ်းသပ်မှုသည်အစာရှောင်ခြင်းအခြေအနေတွင် (ဖျော်ရည်ကိုမှောင်မိုက်ခြင်းသံသရာကာလအတွင်းကန့်သတ်ထားပြီးနောက်) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုတွင်တုန့်ပြန်မှုများသည်ပစ်မှတ်ထားပြီးသော NAc ပြီးနောက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည် (n = 7) မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် 1.5 μg NAc eticlopride hydrochloride ဖြစ်စေ၏ပေးပို့။ စမ်းသပ်ခြင်းသည်အစာရှောင်ခြင်းအခြေအနေတွင် (ဖျော်ဖြေမှုကိုမှောင်မိုက်ခြင်းသံသရာကာလအတွင်းတားဆီးပြီးသည်နောက်၊ ဇယား ၃ တွင်ဖော်ပြထားသည်အတိုင်း) ပုံ။ ၁).
2.3.5 ။ NAc အတွက် dopamine related ဗီဇစကားရပ်စားနပ်ရိက္ခာဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများ
key ကိုရှေးခယျြထား dopamine-related မျိုးဗီဇ၏မျိုးဗီဇစကားရပ်စားနပ်ရိက္ခာဆင်းရဲချို့တဲ့-မောင်းနှင်အပြောင်းအလဲများ [dopamine receptors D1A, D2, D3, D5, catechol-O-methyltransferase (COMT), နှင့် monoamine oxidase တစ်ဦးက (Mao)] ပု NAc အတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။
2.3.6 ။ RNA အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ mRNA စကားရပ်
ဦး နှောက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး NAc ကို ဦး နှောက်မက်ထရစ်ကိုသုံးပြီးနိုက်ထရိုဂျင်အရည်ကိုအေးခဲစေပြီး mRNA ထုတ်ဖော်မှုကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်သိုလှောင်ထားသည်။ တစ် ဦး ချင်း ဦး နှောက်နမူနာများကို Tissue Lyser (Qiagen) ကို အသုံးပြု၍ Qiazol (Qiagen, Hilden, Germany) တွင်တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း RNA ကို DNAse ကုသမှု (Qiagen) ဖြင့် RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (Qiagen) ဖြင့်ထုတ်ယူခဲ့သည်။ RNA အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ကို spectrophotometric တိုင်းတာမှုများ (Nanodrop 1000, NanoDrop Technologies, USA) မှအကဲဖြတ်သည်။ cDNA ပေါင်းစပ်မှုအတွက် iScript cDNA ပေါင်းစပ်ကိရိယာ (BioRad) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ RT PCR ကို TaqMan ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်® On-line catalog (Applied Biosystems) မှရွေးချယ်ထားသောပစ်မှတ်မျိုးရိုးဗီဇအတွက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် primer အစုံ။ Gene expression တန်ဖိုးများကိုတွက်ချက်သည် Ct နည်းလမ်း ( Livak နှင့် Schmittgen, 2001), ဘယ်မှာ ကြော်ငြာ libitum အောင်ကျွေးအုပ်စုကစံကိုက်ညှိသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ Glyceraldehyde-3-ဖော့စဖိတ် dehydrogenase (GAPDH) ကိုကိုးကားဗီဇအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
2.3.7 ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အားလုံးအမူအကျင့် parameters တွေကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကှဲလှဲ (ANOVA) ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် post ကို hoc Tukey HSD စာမေးပွဲသည်သင့်တော်သလိုသို့မဟုတ်ကျောင်းသား၏ t နှစ်ခုသာအခြေအနေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခဲ့ကြသည်ရှိရာစမ်းသပ်။ အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ GraphPad software ကိုသုံးပြီးကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ကွာခြားချက်များမှာသိသာစဉ်းစားခဲ့ကြ p <0.05 ။
3.1 ။ VTA ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်များနှင့် Chow စားသုံးမှုအပေါ် D1 တူသောအဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (NAc) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အဆိုပါ D1 ကဲ့သို့ receptors မှာလှုပ်ရှားမှု sucrose များအတွက်တုံ့ပြန် ghrelin-သွေးဆောင်အော်ပရေတာတစ်ဦး D1 တူသောရန် (SCH-23390) နဲ့ pretreatment များ၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူအတွက် VTA ghrelin-သွေးဆောင်တိုးဘို့လိုအပ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။ တစ်လမ်း ANOVA (အောက်ပါတစ်ဦးက post ကို hoc Tukey စမ်းသပ်F(3,33) = ၆၈.၃၃၊ p <0.0005; F(3,33) = ၆၈.၃၃၊ p <0.01; F(3,39) = ၆၈.၃၃၊ p ဆုများအတွက် <0.05, active lever and chow အသီးသီးသည်ကရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကို ghrelin သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြသည် (p <0.0005; ပုံ။ ၁တက်ကြွလီဗာပုံနှိပျ၏တစ်ဦး), အရေအတွက်က (p <0.05; ပုံ။ ၁B က), နှင့် Chow စားသုံးမှု (p <0.05; ပုံ။ ၁ကို C) ​​။ ဆုလာဘ်အပြုအမူ-ဆက်စပ် parameters တွေကို, အရရှိခဲ့သည်ဆုလာဘ်များနှင့်တက်ကြွလီဗာပုံနှိပျ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း (SCH-23390 pretreatment ပိတ်ဆို့ခဲ့သည် ပုံ။ ၁A, B) ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားလီဗာမှာ Activity ကိုအသေးစားနှင့် (ထိုကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး ပုံ။ ၁B) မှကုသမှုလှုပ်ရှားမှုအတွင်း unspecific Non-ရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ပါကြောင်းအကြံပြု။ ghrelin အဆိုပါ VTA သို့ microinjected ခံခဲ့ရပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိ Chow hyperphagia (SCH-23390 pretreatment အားဖြင့်ပြောင်းလဲမခံခဲ့ရ ပုံ။ ၁ဂ) ။ ဤအချက်အလက်များက NAc shell တွင် dopamine နှင့် D1 ကဲ့သို့သော receptors များသည် ghrelin ၏အောက်တွင်ရှိပြီး VTA မှအုပ်ချုပ်သော ghrelin သည်အစားအစာဆုချခြင်းအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ Grelin ၏ chow စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းအတွက်၎င်းတို့သည်မလိုအပ်ပါ။ SCH-23390 နှင့်အတူ NAc ကုသမှုသက်ရောက်မှုမရှိပါ se နှုန်း အစားအစာသို့မဟုတ် Chow စားသုံးမှုများအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာ (တစ်ခုခုပေါ် ပုံ။ ၁).
Intra-NAc shell ကို D1 receptor ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ Intra-VTA ghrelin- သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့် hyperphagia chow အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ D-like receptor antagonist, SCH-1 ဖြင့်ကြိုတင်ကုသမှုသည် ghrelin-induced sucrose ဆုများရရှိမှု (A) နှင့်လုံးဝမပိတ်နိုင်သည့် lever (အနက်ရောင်ဘားများ) တွင်မလှုပ်ဘဲ Lever (မီးခိုးရောင်ဘား) များရှိနေစဉ်။ ကုသမှု (ခ) ကိုမဆိုထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ Intra-VTA ghrelin hyperphagia ကို D23390 receptor (C) ၏ NAc shell ရွေးချယ်သောပိတ်ဆို့ခြင်းကလျော့နည်းသွားခြင်းမရှိချေ။ တန်ဖိုးများကိုсредства + SE အဖြစ်ပြသသည်။ n = 12-14 ။ *p <0.05, ***p <0.005 ။
3.2 ။ VTA ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်များနှင့် Chow စားသုံးမှုအပေါ် D2 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (NAc) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အဆိုပါ D2s မှာလှုပ်ရှားမှုအစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူများ၏ VTA ghrelin-သွေးဆောင်မြင့်၏စကားရပ်များအတွက်လိုအပ်သောရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, sucrose operating အပြုအမူအတွက် ghrelin-သွေးဆောင်တိုးအပေါ်တစ်ဦးရွေးချယ် D2 ရန် (eticlopride Hydrochloride) နဲ့ pretreatment များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမျးသပျခဲ့သညျ။ ANOVA မူးယစ်ဆေးကုသမှု (တစ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြတလမ်းတည်းဖြင့်F(3,18) = ၆၈.၃၃၊ p <0.0005; F(3,18) = ၆၈.၃၃၊ p <0.001; F(3,39) = ၆၈.၃၃၊ p <0.05 ဆုလာဘ်, တက်ကြွစွာလီဗာနှင့် chow အသီးသီး) ။ post-hoc Tukey စမ်းသပ်မှုမှရရှိသောဆုများမှာသိသိသာသာတိုးလာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။p <0.01; ပုံ။ ၁တစ်ဦးက) နှင့်တက်ကြွလီဗာပုံနှိပျ (p <0.01; ပုံ။ ၁B) မှ eticlopride pretreatment နှင့်အတူပိတ်ဆို့ခဲ့ ghrelin ကုသမှုပြီးနောက်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားလီဗာမှာ Activity ကိုအသေးစားနှင့် (ထိုကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး ပုံ။ ၁B က) ။ ဒေတာတုံ့ပြန်အော်ပရေတာမှမတူဘဲ, eticlopride pretreatment (Chow စားသုံးမှုအတွက် ghrelin-သွေးဆောင်တိုးပြောင်းလဲပစ်ဘူးp <0.05; ပုံ။ ၁ဂ) ။ ဒီပေါင်းစပ်လေ့လာမှုမှာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအတွက် prereatment × ghrelin အကြားအပြန်အလှန်အားဖြင့် ANOVA မှအတည်ပြုခဲ့သည်။ F(1,24) = ၆၈.၃၃၊ p <0.05; active lever press: F(1,24) = ၆၈.၃၃၊ p <0.05 ပေမယ့် chow စားသုံးမှုမ။ ထို့ကြောင့် D2 receptor များသည် grrelin မှအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောင်းလဲစေပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအသုံးမပြုပါ။
Intra-NAc shell ကို D2 receptor ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ Intra-VTA ghrelin- သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့် hyperphagia chow အပေါ်သက်ရောက်မှု။ eticlopride hydrochloride (ETC) ဖြင့်ကြိုတင်ကုသမှုသည် ghrelin-induced sucrose ဆုလာဘ်များတိုးပွားလာခြင်း (A) နှင့်တက်ကြွသော lever presses အရေအတွက် (အနက်ရောင်ဘားများ) ကိုဖျက်သိမ်းပြီးမလှုပ်မရှား lever (မီးခိုးရောင်ဘားများ) တွင်လုပ်ဆောင်မှုမရှိခြင်း အဆိုပါကုသမှု (ခ) မဆိုကြောင့်ထိခိုက်။ ဆနျ့ကငျြ၌အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ghrelin hyperphagia D2 receptors (C) ၏ NAc shell ကိုရွေးချယ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် attenuated မခံခဲ့ရပါဘူး။ တန်ဖိုးများကိုсредства + SE အဖြစ်ပြသသည်။ n = ၇ *p <0.05, **p <0.01 ။
3.3 ။ VTA ghrelin-သွေးဆောင် Chow စားသုံးမှုအပေါ် D1 တူသောနှင့် / သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (NAc) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
chow အစာကျွေးခြင်းအပေါ် dopamine antagonists နှစ်ခု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကိုနောက်ထပ်အတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲကြွက်များတွင်ဤအကြိမ်သည် operant အေးစက်သည့်စံနမူနာကိုထိတွေ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဤအတည်ပြုခြင်းလေ့လာမှုကိုတတိယအကြိမ်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် D1 ကဲ့သို့သောနှင့် D2 receptor antagonists များကို VTA ghrelin-အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ် NAc သို့ပူးတွဲပေးပို့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဆေးထိုးပြီးနောက် ၂ နာရီ (VTA ghrelin) သည် Chow စားသုံးမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည် (တစ်နည်းဆိုရသော် ANOVA: F(3,30) = ၆၈.၃၃၊ p <0.005 နှင့် F(3,27) = ၆၈.၃၃၊ p <0.0005 ကိုအသီးသီး D1 နှင့် D2 receptor လေ့လာမှုအတွက်) နှင့်၎င်းသည် D1 ကဲ့သို့သောကြိုတင်ကုသမှုကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ ပုံ။ ၁တစ်ဦးက) သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ရန် ( ပုံ။ ၁ခ) နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတွင် dopamine receptor antagonists နှစ်ခု၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃ နာရီအချိန်အထိ VTA ghrelin ၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကိုမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ ဤလေ့လာမှုတွင်လိုအပ်သောသုံးဆ parenchymal ဆေး၏သက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်နိုင်သည်။ ANOVA ကုသမှု၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်ပြတလမ်းတည်းဖြင့် (F(3,30) = ၆၈.၃၃၊ p <0.0005) ။ VTA ghrelin ဖြန့်ဝေပြီးနောက်အစာစားသုံးမှုသည် ၃ နာရီအချိန်၌အရေးပါမှုကိုရောက်ရှိခဲ့သည်၊ သို့သော် dopamine receptor antagonists များ၏ NAc သို့ပူးတွဲလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းကို ထပ်မံ၍ မတားဆီးနိုင်ပါ။ ပုံ။ ၁ကို C) ​​။ အဆိုပါ NAc မှနှစ်ဦးစလုံး dopamine အဲဒီ receptor ရန်များ၏စုစုပေါင်းလျှောက်လွှာမပါအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သတိပြုပါ se နှုန်း အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်။
မည်သည့်ကြိုတင်အော်ပရေတာလေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ် sucrose ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲကြွက်များတွင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc shell ကို dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ကြွက်များတွင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ghrelin- သွေးဆောင် Chow hyperphagia အပေါ်သက်ရောက်မှု။2နာရီအကြာတွင်ဆေးထိုးပြီးနောက်တိုင်းတာ VTA ghrelin- သွေးဆောင် hyperphagia (က) D1 ကဲ့သို့သော receptor ရန်ဆန့်ကျင်သူ၊ SCH-23390 (SCH) သို့မဟုတ် (ခ) D2 receptor antagonist, eticlopride hydrochloride (NAc) နှင့်ကြိုတင်ကုသမှုဖြင့်နှိမ်နှင်းခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ ETC) ။ (C) တွင် ၃ နာရီအချိန်၌တိုင်းတာသော ghrelin အားဖြင့်သွေးဆောင် chow hyperphagia သည်ရန်သူနှစ် ဦး စလုံး၏ NAc ပူးတွဲအုပ်ချုပ်မှုမှဖိနှိပ်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ တန်ဖိုးများကိုсредства + SE အဖြစ်ပြသသည်။ n = 10-11 ။ *p <0.05, **p <0.01 ။
3.4 ။ အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်များနှင့် Chow စားသုံးမှုအပေါ် D1 တူသောနှင့် D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အစာအာဟာရချို့တဲ့မှုသည်အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုနှင့် ၁ နာရီစားသုံးမှုနှစ်မျိုးစလုံးကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ကြွက်များသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သောအခါနှစ်ကြိမ်နီးပါးအထိတက်ကြွသောလီဗာကိုဖိအားပေးခဲ့ပြီး ၁ နာရီတိုင်းတာသည့်နေရာ၌ ၃ ဆမှ ၆ ဆအထိပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့သည် (မော်တော်ယာဉ်အခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) သင်္ဘောသဖန်းသီး။ ၃ နှင့် 4) ။ အစားအစာဆုလာဘ်တစ်ခုလျှော့ချရေးရရှိခဲ့သည်အဖြစ်အကဲဖြတ်အခါ NAc shell ကိုအတွက် D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ပိတ်ဆို့သိသိသာသာအစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူအတွက်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်မြင့်လျှော့ချ (p <0.01; ပုံ။ ၁တစ်ဦးက) နှင့်တက်ကြွလီဗာပုံနှိပျတစ်လျှော့ချရေး (p <0.01; ပုံ။ ၁B က) ။ ဒီကုသမှု (အစားအစာ-ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင် Chow စားသုံးမှုအပေါ်မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ ပုံ။ ၁ကို C) ​​။ အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူအတွက် NAc shell ကိုသိသိသာသာလျှော့ချအစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်မြင့်သို့ D2 ရန်၏ပြုတ်ရည်အစားအစာဆုလာဘ်တစ်ခုလျှော့ချရေးအဖြစ်အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာ (ရရှိခဲ့p <0.01; ပုံ။ ၁တစ်ဦးက) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် D2 ပိတ်ဆို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ရလဒ်ပြီးနောက်တိုင်းကြွက်နှိပ်သည်၎င်း၏တက်ကြွလီဗာလျှော့သော်လည်း (p = 0.08; ပုံ။ ၁ခ) ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်လီဗာဖိအားမြင့်မားခြင်း၏အခြေခံပြောင်းလဲနိုင်မှု (မော်တော်ယာဉ်အတွက်စံအမှား = ၈၆ နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေများအတွက် ၄၁၊ ယာဉ်ပေါ်တွင် ၅၇ မှ ၇၀၇ အထိပုံ နှိပ်၍ တက်သောလီဗာ) ။ ဒေတာအစုကနေအမြင့်ဆုံးတုံ့ပြန်ကြွက်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ရလဒ်များ p = 0.001 ။ အထူးသဖြင့်ဖယ်ထုတ်ထားသောကြွက်သည်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင် ၇၀၇ ပုံနှိပ်စက်နှင့်မူးယစ်ဆေး ၃၀၃ ကိုသာပြသခဲ့ပြီး၊ dopamine receptor antagonist များသည်မလှုပ်မရှားနေသောလီဗာကို နှိပ်၍ လီဗာကိုမပြောင်းလဲစေပါ။ NAc ရှိ D707 ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် Chow စားသုံးမှုကိုမပြောင်းလဲပါ ( ပုံ။ ၁ကို C) ​​။
အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့် chow hyperphagia အတွက်အစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့ - သွေးဆောင်မြင့်အပေါ် Intra-NAc shell ကို D1 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ D-receptor antagonist, SCH-1 ဖြင့်ကြိုတင်ကုသမှုသည်ရရှိသောအစားအစာအားမဆုံးရှုံးစေနိုင်သော - sucrose ဆုများတိုးပွားလာခြင်း (A) နှင့်တက်ကြွသောလီဗာပုံသဏ္numberာန်များလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်မလှုပ်မရှားနိုင်သည့်လီဗာ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ကုသမှုတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ။ Chow hyperphagia ကို D23390 receptor (C) ၏ NAc shell ရွေးချယ်သောပိတ်ဆို့ခြင်းကမနစ်နာစေပါ။ တန်ဖိုးများကိုсредства + SE အဖြစ်ပြသသည်။ n = 20. **p <0.01 ။
အစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့် chow hyperphagia အတွက်အစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့ - သွေးဆောင်မြင့်အပေါ် Intra-NAc shell ကို D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ eticlopride hydrochloride (ETC) ဖြင့်ကြိုတင်ကုသမှုသည်ရရှိသော (S) ရရှိသော sucrose ဆုလာဘ်များမှအစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး (A) ရရှိသောတက်ကြွသောလီဗာပုံနှိပ်စက် (B) ကိုလျော့နည်းစေသည်။ မလှုပ်မရှား lever ရှိလုပ်ဆောင်မှုသည်ကုသမှုတစ်စုံတစ်ရာ (B) မှမထိခိုက်ပါ။ Chow hyperphagia ကို D2 receptor (C) ၏ NAc shell ရွေးချယ်သောပိတ်ဆို့ခြင်းကလျော့မသွားပါ။ တန်ဖိုးများကိုсредства + SE အဖြစ်ပြသထားသည် n = 7. **p <0.01 ။
3.5 ။ NAc အတွက် dopamine-related ဗီဇစကားရပ်စားနပ်ရိက္ခာဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများ
နေ့ချင်းညချင်းအစာရှောင်ခြင်းဟာ NAc အတွက်အများအပြား dopamine related မျိုးဗီဇ၏ mRNA စကားရပ်အပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ dopamine အဲဒီ receptor D2 mRNA မွငျ့မားခဲ့စဉ် dopamine အဲဒီ receptor D5 ၏ mRNA ၏ expression ကိုသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ Dopamine အဲဒီ receptor D1, D3, COMT နှင့် Mao mRNAs (ထိုနေ့ချင်းညချင်းအစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲမပုံ။ ၁) ။ CNS အတွက် D1 နှင့် D2 ရှိနေခြင်းအများကြီးပိုကန့်သတ်နေစဉ် D3 နှင့် D5 receptors ဦးနှောက်ထဲမှာအပေါများဆုံး dopamine အဲဒီ receptor စဉ်းစားနေကြသည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည် D5 မှ D1 receptors ၏ accumbens အတွက် mRNA အဆင့်ဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနှင့် 2% မှာရောက်ရှိလာခဲ့; အလားတူကြားဆက်ဆံရေး D3 နှင့် D2 (Data ပြမဟုတ်) အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ D1 နှင့် D2 receptors အဆိုပါ NAc တွေ့ရှိစုစုပေါင်း dopamine အဲဒီ receptor mRNA သာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုနေချိန်တွင် NAc အတွင်း dopamine အဲဒီ receptor mRNA များ၏အများစုသည် D3 နှင့် D5 receptors ၏တက်လုပ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။
Nucleus သည် dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗီဇဖော်ပြချက်ကိုအစားအစာကန့်သတ်ချက်ပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တန်ဖိုးများကိုсредства + SE အဖြစ်ပြသသည်။ *p <0.05 ။
လက်ရှိလေ့လာမှု၏အဓိကတွေ့ရှိချက်များအရ NAc ၏အခွံတွင် dopamine အချက်ပြခြင်းသည် ghrelin ၏စားနပ်ရိက္ခာအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် Ghrelin ၏အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်။ ရလဒ်များအရ NAc အခွံရှိ D1 နှင့် D2 receptors များသည် ghrelin-activated circuit ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး VTA သည် ghrelin အားအစားအစာဆုချခြင်းအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ NAc (shell) တွင် D1 နှင့် D2 receptor အချက်ပြမှုများသည် ghrelin ၏ chow စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းအတွက်မရှိမဖြစ်မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်အလက်များကအစားအစာစားသုံးမှုနှင့်စားသုံးမှုကိုအားဖြည့်ပေးသောထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်သော Ghrelin အတွက်အာရုံကြောဆိုင်ရာပစ်မှတ်များကိုမတူကွဲပြားကြောင်းဖော်ပြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရဤဆားကစ်သည် endogenous ghrelin ၏ပါဝင်မှုကိုပြသနေသကဲ့သို့အစာငတ်မွတ်နေသည့်အခြေအနေတွင် ghrelin ပမာဏမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ NAc တွင် dopamine အချက်ပြမှုတိုးပွားလာသောအစားအစာဆုလာဘ်အပြုအမူအတွက်လိုအပ်သည်။
ကရှင်းပါတယ်နေချိန်မှာအံ့သြစရာ ghrelin (ထို dopaminergic သည့်စနစ်တခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Abizaid et al ။ , 2006, Jerlhag et al ။ , 2007, Kawahara et al ။ , 2009 နှင့် Weinberg et al ။ , 2011Grelin ၏အစားအစာရရှိမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံသည် NAc dopamine receptor signaling (ဤကိစ္စတွင် D1 ကဲ့သို့နှင့် D2 အချက်ပြခြင်း) လိုအပ်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာပြီးအခြားဟော်မုန်းများသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် neuropeptides များကို mesolimbic dopamine system နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ဥပမာအားဖြင့် Leptin ၌ ghrelin ကဲ့သို့ VTA ရှိ dopamine neuron များ၌ receptors ရှိသည်။ ထို leptin-sensop dopaminergic neuron အများစုသည် striatum သို့မသွားပဲ amygdala ကိုထိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။Hommel et al ။ , 2006 နှင့် Leshan et al ။ , 2010) ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစားအစာစားသုံးမှုအမူအကျင့်ကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း Melanocortin, အ VTA အတွက် receptors အတူအစွမ်းထက် anorexigenic neuropeptide တစ်ခုလာဖို့အေးဂျင့်ဘို့ခန့်မှန်းစေခြင်းငှါအဘယျသို့မတူဘဲအတွက်အမှန်တကယ် (က, striatum အတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုနဲ့ dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးတောရက်စ် Celis, 1988, Lindblom et al ။ , 2001 နှင့် Cone, 2005) ။ ရှုပ်ထွေး၏နောက်ထပ် layer ကို ghrelin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလွှတ်သည့် dopamine- အစားအစာရရှိမှုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပေါ်လာညွှန်ပြဒေတာများကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်: microdialysis အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ NAc dopamine အဆင့်ဆင့်သာ Peripheral တိုးပွားလာခဲ့သည် ghrelin အုပ်ချုပ်မှုအပြီးစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ကြောင်းကြွက်များတွင် ghrelin လျှောက်ထား (ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုစမ်းသပ်အခြေအနေများအတွက်ကဲ့သို့) ပင်အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့် (ငြင်းပယ်သောလူပေါင်းကားအတွက် ghrelin အားဖြင့်နှိမ်နင်းခဲ့သည်Kawahara et al ။ , 2009), တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုမကြာသေးမီကပါ (VTA အတွက် differential ကို opioid အချက်ပြလမ်းကြောင်းပါဝင်ပြသKawahara et al ။ , 2013) ။ ဤဥပမာနှစ်ခုသည် peptides များကိုအစာကျွေးခြင်း၊ အစာရရှိရန်နှင့် dopamine အကြားဆက်နွယ်မှုရှုပ်ထွေးမှုကိုအလေးပေးသည်။ အစားအစာဆုချခြင်းအပြုအမူအတွက် ghrelin ၏ dopamine စနစ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၏အရေးပါပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
ရလဒ်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ရှုထောင့်အစားအစာစားသုံးမှု vs. အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုအပေါ် NAc dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ခြားနားသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသကျနော်တို့2လွတ်လပ်သောလေ့လာမှုများအတွက် VTA ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်အချက်ပြနှိမ်နင်း NAc dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအတည်ပြုခဲ့သည်: တဦးတည်းပါရာဒိုင်းအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုတိုင်းတာခြင်းသကြားဆုလာဘ်အစာစားခြင်းနောက်ဆက်တွဲပြောင်းလဲနိုင်သည့်အဘို့စမ်းသပ် (တုံ့ပြန်ချက်ချင်းအော်ပရေတာပြီးနောက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် Chow စားသုံးမှု) နှင့်, အခြားထဲတွင်သာအစားအစာစားသုံးမှုမတိုင်မီအော်ပရေတာစမ်းသပ်ခြင်းမရှိဘဲတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုင်းတာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် NAc မှနှစ်ဦးစလုံး dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏ Co-လျှောက်လွှာကိုပြသနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒုတိယစမ်းသပ်မှုအတွက် NAc dopamine D1 တူသောနှင့် D2 receptors ကနေတဆင့်ပြသောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုတိုးမြှင့်, VTA ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ ghrelin hyperphagia ဘို့မလိုအပ်ပါ။ အဆိုပါရန် VTA ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကြားဖြတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူခေါ်ဆောင်သွားဤစုပေါင်းရလဒ်များကိုတလက်တလက်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်အခြားအစားအစာလှုံ့ဆျောမှု / ဆုလာဘ်ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အတူ, VTA ghrelin ၏မြစ်အောက်ပိုင်း neuro-circuitry တစ်ဦးမတူကွဲပြားအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာ ghrelin အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုရှိသော်လည်းစားသုံးမှုပြောင်းလဲပစ်ရန် dopamine အသုံးချပုံရသည်။ ယခင်ကကျနော်တို့ (VTA ghrelin တခုဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံ၌အစားအစာစားသုံးမှုနှင့် opioids ထိန်းချုပ်ဖို့ရွေးချယ်သည့် VTA အတွက် neuropeptide Y ကိုထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါကကြောင်းပြသSkibicka et al ။ , 2012a) ။ ထို့ကြောင့်ပြီးသားအစားအစာကို-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူသာရှိပြီးပြည်ပမှစားသောက်ကုန်စားသုံးမှုများအတွက် ghrelin အားဖြင့်စေ့စပ်အဆိုပါ circuitry တစ်ဦးမတူကွဲပြားဘို့စားပေးမှုရှိနေပါသည်။
Accumbal D1 ကဲ့သို့ receptors အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc D1 တူသောရန်ပြုတ်ရည်အစားအစာဆီသို့ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူလျော့နည်းစေကြောင်းညွှန်ပြယခင်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုခင်းကျင်းနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာအားဖြည့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထူထောင်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်။ စနစ် D1 တူသောအဲဒီ receptor ရန် (ဥပမာ [ကင်း, ဘိန်းဖြူ, နီကိုတင်းနှင့်အရက်၏ cue- သို့မဟုတ်အခြေအနေတွင်-သွေးဆောင် Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချWeissenborn et al ။ , 1996, လျူနှင့် Weiss, 2002, Bossert et al ။ , 2007 နှင့် လျူ et al ။ , 2010)], ဆုလာဘ်-oriented ဖြစ်စဉ်များတွင်ဤ receptors ၏သော့အခန်းကဏ္ဍမီးမောင်းထိုးပြ။ ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာ NAc D1 ကဲ့သို့ receptors VTA-သရုပ်ဆောင် ghrelin အားဖြင့် activated အဆိုပါ circuitry တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ဒြပ်စင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ Support, ဒီ D1 ရန်၏အရံ application ကိုလည်း (ghrelin-တိုးမြှင့်အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုလျှော့ချရန်ပြသထားသည်Jacoby နှင့်ဟင်း, 2011) ။ သို့သျောလညျးအရံ application ကိုပစ်မှတ်ဦးနှောက်နှင့် NAc ပြင်ပလူဦးရေ (ဥပမာအဘို့, hippocampus အတွက်) လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိနိုင်ပါသည်သောသူအပေါင်းတို့သည် D1-ဖော်ပြအာရုံခံလူဦးရေကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက NAc လူဦးရေကိုလေ့လာခြင်းရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး ဤနေရာတွင် ghrelin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ။
D2 receptors မကြာခဏ D1 နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ပြုမူ; အရှင်အများအပြားလေ့လာမှုများဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆုလာဘ် oriented အပြုအမူ၏ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ D2 receptors တစ်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ D1 နှင့် D2 receptors အမြဲအတူတူပင်လမ်း wrt ဆုလာဘ် function ကိုလုပျဆောငျမမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ D1 ရန်အမှန်တကယ်ကဒီအပြုအမူကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်နေစဉ် amygdala ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, D2 receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (cue-သွေးဆောင်ကင်းရှာဖို့ reinstatement attenuatesBerglind et al ။ , 2006) ။ NAc အတွက် D2 receptors အဆိုပါ hypothalamus အတွက်သူတို့အားတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက် function ကိုအစေခံရန်ပေါ်လာအတိုင်းဤအလုပ်လုပ်တဲ့ dissociation လည်း, တစ်ဦး neuroanatomical အလှူငွေနိုင်ပါသည်။ အတွက် D2 receptors ၏ NAc ဆွအစားအစာရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကွိုးစားအားထုတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်အောင်ပိုပြီး, အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, D2 receptors ၏ hypothalamus ဆွအတွက် (ရှင်းလင်းစွာလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်Leibowitz နှင့် Rossakis, 1979 နှင့် Nowend et al ။ , 2001) ။ ဒါဟာပစ်မှတ်အဲဒီ receptor လူဦးရေ function ကိုဆန့်ကျင်ရန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအဘို့အ D2-ပစ်မှတ်ထားမူးယစ်ဆေးရံလျှောက်လွှာအပြီးရလာဒ်များအနက်ကိုဘော်ပြရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြသောအကြောင်းပြချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်, ယခင်လေ့လာမှုတစ်ခု D2 ရန်၏အရံဆေးထိုး ghrelin-သွေးဆောင်တစ် sucrose ဖြေရှင်းချက်များအတွက်တုံ့ပြန်မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းပြချက် D2 ယင်း၏ activation dopaminergic လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှိပ်ကွပ်နေတာတွေကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ရှိရာ substantia nigra နှင့် VTA အတွက် dopamine ထုတ်လုပ်အာရုံခံတခုတခုအပေါ်မှာ autoreceptor, (ဖြစ်ပါတယ်Lacey et al ။ , 1987) ။ Peripheral ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုသာ NAc shell ကို D2 အဲဒီ receptor ကိုပစ်မှတ်ထားစဉ်တွင်ထို့ကြောင့်, D2-ပစ်မှတ်ထားမူးယစ်ဆေးဝါးများအလားအလာ, ဒီအဲဒီ receptor လူဦးရေမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုငျသညျ။ အထူးသ, စနစ်တကျ D1 တူသောအဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အသားတင်အကျိုးသက်ရောက် (အတူတူပင်ပါရာဒိုင်းအတွက်တစ်ဦး sucrose သောက်စရာဘို့တုံ့ပြန်ပိတ်ဆို့လုပ်ခဲ့တယ်Overduin et al ။ , 2012) ။ တစ်ဦး D1 agonist ၏စနစ်တကျဆေးထိုး (ကလျော့ကျစေပါတယ်စဉ်ထို့အပြင်တစ်ဦး D2 agonist ၏စနစ်တကျ, အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးအရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာများအတွက် preference ကိုမြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသောCooper ကနှင့် Al-Naser, 2006) ။ ထို့ကွောငျ့ ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုအပေါ် D1 ရန်တစ်နှိပ်ကွပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဆုလာဘ် function ကိုအပေါ် D1 receptors လှုံ့ဆော်၏အလုံးစုံအသားတင် (ဖိနှိပ်မှု) အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အညီကြောင်းကိုပုံရသည်။ data သည် NAc ဒီမှာတင်ဆက်ထက်ဆနျ့ကငျြဘအသုံးပြုပုံ D2 အဲဒီ receptor လူဦးရေရဲ့ပိုက်ကွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် hypothalamic D2 receptors အကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုကြောင်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအောက်ပါအတိုင်း။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု D1 တူသောနှင့် D2 နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရန် VTA ghrelin အုပ်ချုပ်မှုအပြီးနှင့် NAc အတွက်နှစ်ဦးစလုံး receptors မှာသမဝါယမအရေးယူယင်း၏သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမှ ghrelin အတှကျလိုအပျကွောငျးအကြံပြုခြင်းအစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီးနောက် sucrose များအတွက် operating အပြုအမူပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့တယ်။ VTA-ဆင်းသက်လာ dopaminergic ဆိပ်ကမ်းတစ်ပြိုင်နက်အားလုံးလက်လှမ်း dopamine receptors ကိုသက်ဝင်သည့် NAc shell ကိုအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် endogenous ခွအေနအေထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါဒီအသိကိုမှန်ကန်စေသည်။ နှစ်ဦးစလုံး D1 တူသောနှင့် D2 receptors ၏တစ်ပြိုင်နက် activation ဘို့လိုအပ်ကြောင်းပြီးသား (အားဖြည့်အပါအဝင်အခြားအပြုအမူတွေကိုအစီရင်ခံထားသည်Ikemoto et al ။ , 1997) နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှု (Plaznik et al ။ , 1989) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အာရုံခံပစ်ခတ်ရန် (အဖြူ, 1987) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုတစ်ဦးတည်းသာနှစ်ခု dopaminergic receptors ၏ပိတ်ဆို့သူတို့အား receptors ၏တဦးတည်းဖြစ်စေ၏ပိတ်ဆို့ ghrelin-မောင်းနှင် sucrose operating အပြုအမူလျှော့ချရန်လုံလောက်သောခဲ့သကဲ့သို့သူတို့အားအပြုအမူတွေကိုလျှော့ချရန်လုံလောက်သောခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီအပြန်အလှန်နောက်ကွယ်မှယန္တရားမရှင်းလင်းသည်။ အဆိုပါ NAc coexpress D1 နှင့် D2 နှစ်ဦးစလုံး receptors အတွက်တချို့ကအာရုံခံ။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေ heterodimers များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှုကိုလိုအပ်နေပါသည်, (ထို D1 နှင့် D2 receptors အားဖြင့် heterodimers ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ဤနားချင်းဆက်မှီစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူအထောက်အကူပြုပြခဲ့ပါတယ်Pei et al ။ , 2010) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များ NAc အတွက် D1 နှင့် D2 signal ကိုမလိုအပ်တဲ့မရှိ, အသီးအသီးအဲဒီ receptor တစ်ဦးချင်းပိတ်ဆို့အကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှု attenuating အတွက်ထိရောက်သောခဲ့ကတည်းကအစားအစာဆုလာဘ်အပေါ် ghrelin အကျိုးသက်ရောက်မှု transmit နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီပိတ်ဆို့ ghrelin hyperphagia များအတွက်ထိရောက်သောမဟုတ်ခဲ့ကတည်းကထို့အပြင်ကျနော်တို့သီးခြား D1 နှင့် D2 signal ကို Chow စားသုံးမှုများအတွက်မလိုအပ်တဲ့ကြီးနှစ်ဦးစလုံး၏ဆိုလိုသည်မှာတစ်ပြိုင်နက်ပိတ်ဆို့တုံ့ပြန်မှုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုရှိမရှိဖြစ်နိုင်ခြေအကဲဖြတ်ပါပြီ။ ghrelin hyperphagia အဆိုပါ NAc အတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏တစ်ပြိုင်နက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့သည်အတိုင်းဤသို့သော်အမှုကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်အတွက် NAc shell ကို D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor အချက်ပြ Chow စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ ghrelin နေဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်မပေးပါ။
ဤတွင်ကျနော်တို့ NAc ၏ shell ကိုအတွက် D1 တူသောနှင့် D2 receptors ပစ်မှတ်ထား။ (ထို NAc ၏ shell ကိုနှင့်အမာခံ၏ function ကိုအထူးသဖြင့် discrete cue ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အဓိကအခြေခံအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူအချို့သောဒီဂရီမှ dissociable ဖြစ်ဟန်နှင့် shell ကိုအခြေအနေတွင်မူတည်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ပိုမိုသြဇာညောင်းဖြစ်ခြင်းBossert et al ။ , 2007) ။ အဓိကကတော့ amygdala ကနေပိုပြီး input ကိုလက်ခံရရှိနှင့် shell ကိုပိုပြီးထူထပ်ခြင်း (hippocampus အားဖြင့် innervated သည်အဘယ်မှာရှိဒါဟာ functional dissociation အဆိုပါ neuroanatomical ဆက်သွယ်မှုကထောက်ခံသည်,Groenewegen et al ။ , 1999 နှင့် Floresco et al ။ , 2001) ။ ကြွက်လည်း (သာ NAc ၏ shell ကိုနှင့်မ core ကိုအတွက် D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor agonists များ၏ပေါင်းစပ် Self-စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်Ikemoto et al ။ , 1997), ဆုလာဘ်အပေါ်မိမိတို့၏သမဝါယမအရေးယူအဓိကအားဤနေရာတွင်ပစ်မှတ်ထား shell ကိုဒေသနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အထူးအစားအစာစားသုံးမှုနှင့် VTA-လျှောက်ထား ghrelin မောင်းနှင်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်အချက်ပြနှိမ်နင်း NAc dopamine များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသို့သော်ကြောင်း ghrelin ကိုလည်း VTA မှ afferent လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူတွေကိုကားမောင်းစေခြင်းငှါ, မှတ်သားရပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ghrelin (ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် orexin အာရုံခံသက်ဝင်နေဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာ-အားဖြည့်အပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်ပြသထားသည်Perello et al ။ , 2010အဆိုပါ VTA ဖို့မှန်းချက်ရဲ့နဲ့ dopamine လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်ကြောင်း), တစ်ဦး orexinergic ဆဲလ်အုပ်စုတစ်စု (Narita et al ။ , 2006) ။ neuroanatomy နှင့် neuropharmacology သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအထူး VTA-NAc လမ်းကြောင်း dissects စဉ်အခါ, စောင်ရေအတွက်ဖြန့်ချိထားတဲ့ endogenous ခွအေနကေို ghrelin အတွက်ဖွယ်ရှိ VTA မှ efferent projections ဖြင့် ghrelin အဲဒီ receptor ဖော်ပြသည်အခြားဦးနှောက်အရေးပါအဖြစ်ရေတွင်းများအဖြစ် VTA လှုံ့ဆော်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးဇီဝကမ္မအခွအေနအတွက်, ghrelin ၏သက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ပြုမူသောဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြားဆိုဒ်များကိုကျော်ဖြန့်ဝေသည်။ တစ်ဦးဟော်မုန်းဒါမှမဟုတ်အလားတူရလဒ်ကိုထုတ်ယူနိုင်သည့်အနေဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြားဖြန့်ဝေဆိုဒ်များတွင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး neuropeptide များ၏အယူအဆ, ဥပမာအစားအသောက်စားသုံးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု, ဝတ္ထုမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ပြီးသား (leptin နှင့် melanocortin များအတွက်အဆိုပြုနှင့်အကဲဖြတ်ခံထားပါတယ်ကင်, 2006, Leinninger et al ။ , 2009, Skibicka နှင့်ကင်, 2009 နှင့် Faulconbridge နှင့်ဟေးယက်, 2011).
အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ ghrelin ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏မြင့်မားနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့အစားအစာတင်ဆက်မှု၏အခြေအနေများအတွက် (ထို NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် elicitsKawahara et al ။ , 2013) ။ ဒါဟာအာဟာရပြည်နယ်, ကိုလည်း NAc, dopamine receptors (D1 ကဲ့သို့ receptors (D1, D5) နှင့် D2 ကဲ့သို့ receptors (D2, D3)) ၏ mRNA စကားရပ်အပေါ်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသက်ရောက်မှုနှင့် dopamine စော်ကားသောအတွက် dopamine အချက်ပြသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအောက်ပါအတိုင်း အင်ဇိုင်းတွေ (Mao, COMT) ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအကဲဖြတ်။ အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့တိုင်းတာသည့် dopamine လျော့နည်းသွားစေအင်ဇိုင်းတွေမဆို၏ mRNA စကားရပ်ပြောင်းလဲမပြုခဲ့ပေမယ့်, ငါတို့ D5 receptors vs. D2 တစ် differential ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုတွေ့မြင်ကိုပြု၏။ အဆိုပါ D5 အဲဒီ receptor mRNA အကြောင်းကို 30% အထိလျှော့ချနေစဉ် D2 receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးနီးပါး 20% တိုးပွားလာခဲ့သည်။ (ဒီမတူကွဲပြားနှင့်အတူတသမတ်တည်း, တစ်ပြိုင်နက် D1 ကဲ့သို့၏လျှောက်လွှာများနှင့် D2 အဲဒီ receptor agonists ယခင်ကချ-ထိန်းညှိ D2 receptors ပြထားပြီးပေမယ့် substantia nigra အတွက် D1 receptors upregulate မှ (နှင့် NAc အတွက်အလားတူလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ)Subramaniam et al ။ , 1992) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ NAc dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်အပေါ်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ D1 ကဲ့သို့များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြအတူဆုံ (D5 ပါဝင်သည်ကြောင်း) နှင့်စားစရာဘို့အစာရှောင်ခြင်း-သွေးဆောင်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် D2 receptors ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုမှာအတွက်အသိပေးချက်အဆိုပါ VTA ပြင်ပကတခြား ghrelin receptors လူဦးရေအလားအလာ activated နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့တိုး ghrelin အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ ghrelin တိုးမြှင့်ဖို့တစ်ခုထက်ပိုသောဇီဝကမ္မ endogenous နှင့်သက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ထို့ကြောင့်တစ်ခုကိုရွေးချယ် VTA ဆွဘို့အခွင့်မပြုပါဘူး။ ကျနော်တို့ထို့ကြောင့် NAc တွေ့ရှိသည့် dopamine အဲဒီ receptor ပြောင်းလဲမှုများ NAc တခုတခုအပေါ်မှာသွယ်ဝိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ VTA ပြင်ပဒေသများရှိ ghrelin လှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ရှားပစ်လို့မရပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့က NAc dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများပေမယ့်နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်စာမစားမှီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ link ကိုအခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာစူးစမ်းရန်, အမှန်တကယ်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် (ghrelin-နှိုးဆွ) VTA-NAc dopaminergic စီမံကိန်း၏ဖျန်ဖြေခြင်းကိုပြသရန်လိုအပ်သည်နှင့်အမည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည် ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအခြားလမ်းကြောင်းများနှင့် transmitter ကိုစနစ်များသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus တူသော (အထကျဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း) ။
အဆိုပါ neurobiological အလွှာအများအပြားမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် disorders စားနှစ်ဦးစလုံးမှဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် (လက်ရှိတွေ့ရှိချက် ghrelin ၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်မူးယစ်နှင့်အရက်ထဲမှာ D1 တူသောနှင့် D2 receptors တစ်အခန်းကဏ္ဍပြဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်Dickson et al ။ , 2011) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် dopamine တစ်ဦးဖြန့်ချိဖို့အစားအစာနှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်ခဲ (နှစ်ဦးစလုံးဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988) ။ D1 သို့မဟုတ် D2 receptors ၏ပိတ်ဆို့အလွဲသုံးစားမှု, အရက်နှင့်နီကိုတင်း၏မူးယစ်ဆေးများအတွက်ဆုလာဘ်အပြုအမူလျော့နည်းစေသည်။ ဤအရာအလုံးစုံတ္ထုများအဘို့စားသုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အပြုအမူမှ ghrelin တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလှူငွေယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့ပြီးကတည်းကကြောင့်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ ghrelin-VTA-dopamine-NAc circuitry စားစရာဘို့သီးသန့်ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေတစ်ခုခင်းကျင်းများအတွက်သက်ဆိုင်ရာများနှင့်မဟုတျကွောငျး။ မဟုတ်ဘဲဖွယ်ရှိသည် ဒီအယူအဆများအတွက်ပဏာမထောက်ခံမှုအစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ D1 ကဲ့သို့ receptors (များ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဘိန်းဖြူရှာပြန်လည်နိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြဒေတာကနေရေးဆွဲနိုင်ပါသည်Tobin et al ။ , 2009).
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များသည်အဓိကအစားအစာဆုနှင့်ဆက်နွယ်သောအချက်ပြစနစ်နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတအသစ်များပေးသည်။ VTA မောင်းနှင်သောဆားကစ်များမှာ orexigenic hormone, ghrelin နှင့် NAc dopamine-responsive ဆားကစ်များကိုတုန့်ပြန်သည်။ အထူးသဖြင့် ghrelin ၏မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် VTA နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကျိုးဆက်များသည်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုသည် NAc တွင် D1 နှင့် D2 အချက်ပြမှုလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများအရ VTA မောင်းနှင်မှု (D1 / D2- မှီခိုသော) အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ghrelin ၏အစားအစာဆုလာဘ်အပေါ်အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်အရေးကြီးသောသူများအတွက်မတူကွဲပြားသောအချက်များပါ ၀ င်သည်။ ရန်သူက NAc သို့ပေးပို့သောအခါ ghrelin-induced အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ နောက်ဆုံး၌ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသော (ညအိပ်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဤတွင် hyperghrelinemic) ကြွက်များအားလေ့လာခြင်းသည် NAc D1 / D2 အချက်ပြမှုသည် endogenous ghrelin ၏အစားအစာကိုလှုံ့ဆော်သောအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေသည်။ ထို့ကြောင့် NAc ရှိ dopamine အချက်ပြမှုကိုနှောက်ယှက်သောယန္တရားများနှင့်ကုထုံးများသည်နို့တိုက်ကျွေးရေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ယင်း၏ကုသမှုတို့ပါဝင်သောဆုလာဘ်စနစ်အပေါ် ghrelin-mediated သက်ရောက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိသည်။
ဤလုပ်ငန်းကထောက်ခံခဲ့သည် ဆေးပညာအဘို့အဆွီဒင်သုတေသနကောင်စီ (SLD မှ KPS နှင့် 2011-3054 မှ 2012-1758), ဥရောပကော်မရှင်သတ္တမမူဘောင် ထောက်ပံ့ငွေ (FP7-KBBE-2010-4-266408, Full4Health; FP7-ကျန်းမာရေး-2009-241592; EurOCHIP; FP7-KBBE-2009-3-245009, NeuroFAST), Forskning och Utvecklingsarbete / Avtal om Läkarutbildning och Forskning Göteborg (ALFGBG-138741), ပု မဟာဗျူဟာသုတေသနဆွီဒင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့်အဲဒါတွေက Metabolic သုတေသန (A305-188) အတွက် Sahlgrenska Center ကဖို့, NovoNordisk Fonden။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
Abizaid et al ။ , 2006
A. အ Abizaid, ZW လျူ, ZB Andrews က, အမ် Shanabrough, အီး Borok, JD Elsworth, RH အ Roth, မီဂါဝပ် Sleeman, MR Picciotto, MH Tschop, xB Gao, TL Horvath
အစာစားချင်စိတ်မြှင့်တင်နေချိန်တွင် Ghrelin midbrain dopamine အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် Synaptic input ကိုအဖွဲ့အစည်းက modulates
ဂျေ Clin ။ Invest ။ , 116 (2006), စစ။ 3229-3239
Hommel et al ။ , 2006
JD Hommel, R. Trinko, RM Sears, ဃ Georgescu, ZW လျူ, xB Gao, JJ Thurmon, အမ် Marinelli, RJ DiLeone
midbrain dopamine အာရုံခံအတွက်အချက်ပြ Leptin အဲဒီ receptor နို့တိုက်ကျွေးရေးထိန်းညှိ
အာရုံခံဆဲလျ, 51 (2006), စစ။ 801-810
PDF ဖိုင် (523 K)
ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988
အယ်လ်ဟာနန်ဒက်ဇ်, BG Hoebel
microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်များနှင့်ကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးမြှင့်
ဘဝကသိပ္ပံ။ , 42 (1988), စစ။ 1705-1712
PDF ဖိုင် (588 K)
Hansson et al ။ , 2012
C. Hansson, RH အတစ်ခါ, ဂျေ Naslund, အိပ်ချ် Vogel, C. Neuber, G. အ Holmes, အိပ်ချ် Anckarsater, SL Dickson, အီး Eriksson, KP Skibicka
PLoS တစ်ခုမှာ,7(2012), p ။ e50409
Groenewegen et al ။ , 1999
HJ Groenewegen, CI Wright, AV စနစ် Beijer, P. Voorn
ventral striatal သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ၏ convergence နဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 877 (1999), စစ။ 49-63
Grimm et al ။ , 2011
JW Grimm, JH Harkness, C. Ratliff, ဂျေ Barnes, K. မြောက်အမေရိက, အက်စ် Collins
ကြွက်များတွင်ရှာကြံ sucrose အပေါ်စနစ်တကျသို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens-ညွှန်ကြား dopamine D1 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ
Psychopharmacology (Berl), 216 (2011), စစ။ 219-233
စွမ်းအင်ချိန်ခွင်ဖြန့်ဝေအာရုံကြောထိန်းချုပ်မှု: hindbrain နှင့် hypothalamus ထံမှပံ့ပိုးမှုများကို
အဝလွန်။ (Silver Spring), 14 (ပျော့ပျောင်း။ 5) (2006), စစ။ 216S-221S
Floresco et al ။ , 2001
နျူကလိယ၏ hippocampal နှင့် amygdalar-evoked လှုပ်ရှားမှု Modulation dopamine နေဖြင့်အာရုံခံ accumbens: input ကိုရွေးချယ်ရေး၏ဆယ်လူလာယန္တယား
ဂျေ Neurosci ။ , 21 (2001), စစ။ 2851-2860
Faulconbridge et al ။ , 2003
LF Faulconbridge, DE Cummings က JM Kaplan, HJ ကင်
brainstem ghrelin အုပ်ချုပ်ရေး Hyperphagic ဆိုးကျိုးများ
ဆီးချိုရောဂါ, 52 (2003), စစ။ 2260-2265
Faulconbridge နှင့်ဟေးယက်, 2011
LF Faulconbridge, MR Hayes
Psychiatric ။ Clin ။ မြောက်အမေရိက Am ။ , 34 (2011), စစ။ 733-745
PDF ဖိုင် (623 K)
Dickson et al ။ , 2011
SL Dickson, အီး Egecioglu, အက်စ် Landgren, KP Skibicka ဂျေအေအိန်ဂျယ်, အီး Jerlhag
အစားအစာနှင့်ဓါတုမူးယစ်ဆေးဝါးများထံမှဆုလာဘ်အတွက်ဗဟို ghrelin စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ
Mol ။ cell ။ Endocrinol ။ , 340 (2011), စစ။ 80-87
PDF ဖိုင် (494 K)
Cooper ကနှင့် Al-Naser, 2006
SJ Cooper က, HA al-Naser
အစားအစာရွေးချယ်မှု Dopaminergic ထိန်းချုပ်မှု: ကြွက်များတွင် High-အာခေါင်အစားအစာ preference ကိုအပေါ် SKF 38393 နှင့် quinpirole ၏သက်ရောက်မှုခြားနား
Neuropharmacology, 50 (2006), စစ။ 953-963
ဗဟို melanocortin စနစ်၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်စည်းမျဉ်း
နတ်။ neuroscience ။ , 8 (2005), စစ။ 571-578
Cardona Cano et al ။ , 2012
အက်စ် Cardona Cano, အမ် Merkestein, KP Skibicka, SL Dickson, RA သွားလေ၏
မမှန်စားသုံးခြင်း၏ pathophysiology အတွက် ghrelin ၏အခန်းက္ပ: pharmacotherapy များအတွက်ဂယက်ရိုက်
CNS မူးယစ်ဆေးဝါး, 26 (2012), စစ။ 281-296
Cannon et al ။ , 2004
CM Cannon, အယ်လ် Abdallah က, LH Tecott, MJ စဉ်အတွင်း RD Palmiter
စိတ်ကြွဆေးများက striatal dopamine အချက်ပြ၏ Dysregulation ဆာလောင်မွတ်သိပ်ကြွက်အားဖြင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်
အာရုံခံဆဲလျ, 44 (2004), စစ။ 509-520
PDF ဖိုင် (482 K)
Bossert et al ။ , 2007
JM Bossert, GC ရိုးစွန်းဒေသများမှ, ka Wihbey, အီး Koya, Y. Shaham
နျူကလိယအတွက် dopamine D1-မိသားစု receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ differential အကျိုးသက်ရောက်မှုများ Contextual နှင့် discrete တွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင်ရှာကြံဘိန်းဖြူ reinstatement အပေါ်အဓိကသို့မဟုတ် shell ကို accumbens
ဂျေ Neurosci ။ , 27 (2007), စစ။ 12655-12663
Berglind et al ။ , 2006
WJ Berglind, JM ဖြစ်ရပ်မှန်, အမတ်က Parker, RA Fuchs, RE ကြည့်ရှု
အဆိုပါ basolateral amygdala အတွင်း Dopamine D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း differential ကိုကင်း-ရှာ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement များအတွက်လိုအပ်သောကင်း-cue အသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူပွောငျးလဲ
neuroscience, 137 (2006), စစ။ 699-706
PDF ဖိုင် (322 K)
ဘား et al ။ , 1986
A. အဘား, HS Ahn, ဒဗလျူ Billard, Eh ရွှေ, JD Kohli, ဃ Glock, LI Goldberg
SCH 23390 နှင့် D1 / DA1 dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်သုံးစမ်းသပ်မှုအတွက်၎င်း၏ analog ၏ဆွေမျိုးလှုပ်ရှားမှုများ
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ , 128 (1986), စစ။ 249-253
PDF ဖိုင် (385 K)
ဘား et al ။ , 1992
A. အဘား, RD McQuade, C. Tedford
D1 dopamine အဲဒီ receptor ရန်သုတေသန၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည်
Neurochem ။ int ။ , 20 (ပျော့ပျောင်း) (1992), စစ။ 119S-122S
Bardo et al ။ , 1996
MT Bardo, RL Donohew, Ng Harrington
ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ , 77 (1996), စစ။ 23-43
PDF ဖိုင် (2410 K)
Ikemoto et al ။ , 1997
အက်စ် Ikemoto, BS Glazier, JM Murphy, WJ McBride
ဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းက္ပ
ဂျေ Neurosci ။ , 17 (1997), စစ။ 8580-8587
Naleid et al ။ , 2005
Levine AS AM Naleid, MK တော်ကကျေးဇူး, DE Cummings က
Ghrelin အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens အကြား mesolimbic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းထဲမှာအစာကျွေး induces
Peptides, 26 (2005), စစ။ 2274-2279
PDF ဖိုင် (234 K)
Melis et al ။ , 2002
Melis, က MS Mascia, အက်စ် Succu, အေ Torsello, EE Muller, R. Deghenghi, အေ Argiolas MR
Ghrelin အထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း penile စိုက်ထူစာကျွေးသော်လည်းမ induces
neuroscience ။ လက်တ။ , 329 (2002), စစ။ 339-343
PDF ဖိုင် (106 K)
Livak နှင့် Schmittgen, 2001
KJ Livak, TD Schmittgen
Real-time အရေအတွက် PCR နှင့်2(-Delta မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို C (T)) Method ကို အသုံးပြု. ဆွေမျိုးဗီဇစကားရပ်အချက်အလက်များ၏ analysis
နည်းလမ်းများ, 25 (2001), စစ။ 402-408
PDF ဖိုင် (700 K)
လျူ et al ။ , 2010
X တို့မှာလျူ, C. Jernigen, အမ် Gharib, အက်စ် Booth, AR Caggiula, AF Sved
ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေး cue-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ် dopamine ရန်၏ဆိုးကျိုးများ
ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ , 21 (2010), စစ။ 153-160
လျူနှင့် Weiss, 2002
X တို့မှာလျူ, အက်ဖ် Weiss
relapse ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် D1 နှင့် D2 ရန်အားဖြင့်အီသနော-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ပြောင်းပြန်: nondependent ကြွက်နှိုင်းယှဉ်ယခင်ကအီသနော-မှီခိုအတွက်ရန်အာနိသင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု
ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ , 300 (2002), စစ။ 882-889
Lindblom et al ။ , 2001
ဂျေ Lindblom, ခ Opmane, အက်ဖ် Mutulis, ဗြဲ Mutule, R. Petrovska, V. Klusa, အယ်လ် Bergstrom, je Wikberg
အဆိုပါ MC4 အဲဒီ receptor နျူကလိယ၏ alpha-MSH သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရန် dopamine accumbens mediates
Neuroreport, 12 (2001), စစ။ 2155-2158
Leshan et al ။ , 2010
RL Leshan, DM Opland, GW လူးဝစ်, GM က Leinninger, CM ပက်တာ, CJ Rhodes, အိပ်ချ် Munzberg, MG Myers ဂျူနီယာ
Ventral tegmental ဧရိယာ leptin အဲဒီ receptor အာရုံခံအထူးတိုးချဲ့ဗဟို amygdala ၏ cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်းအာရုံခံမှပရောဂျက်များနှင့်ထိန်းညှိ
ဂျေ Neurosci ။ , 30 (2010), စစ။ 5713-5723
Leinninger et al ။ , 2009
GM က Leinninger, YH Jo, RL Leshan, GW လူးဝစ်, အိပ်ချ်ယန်, JG Barrera, အိပ်ချ် Wilson က, DM Opland, MA Faouzi, Y. Gong, JC ဂျုံးစ်, CJ Rhodes, အက်စ်က Chua ဂျူနီယာ, အက်စ် Diano, TL Horvath, RJ Seeley, JB- Becker က, အိပ်ချ် Munzberg, MG Myers ဂျူနီယာ
Leptin အဆိုပါ mesolimbic dopamine system ကို modulate နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးနှိမ်နင်းရန် leptin အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ lateral hypothalamic အာရုံခံမှတဆင့်ပြုမူ
cell Metab ။ , 10 (2009), စစ။ 89-98
PDF ဖိုင် (1733 K)
Leibowitz နှင့် Rossakis, 1979
SF Leibowitz, C. Rossakis
ကြွက်များတွင်တိုက်ကျွေးတားစီးဖြန်ဖြေ perifornical hypothalamic dopamine receptors ၏ Pharmacological စရိုက်လက္ခဏာတွေ
ဦးနှောက် Res ။ , 172 (1979), စစ။ 115-130
PDF ဖိုင် (1043 K)
Laviolette et al ။ , 2008
SR Laviolette, မိုင် Lauzon, SF ဆရာတော်, N. Sun က, အိပ်ချ်တန်
နျူကလီးယပ်အတွက် D1 ကဲ့သို့ receptors နှိုင်းယှဉ် D2 ကဲ့သို့မှတဆင့်ပြ Dopamine shell ကိုနှိုင်းယှဉ် core ကို accumbens differential နီကိုတင်းဆုလာဘ် sensitivity ကို modulates
ဂျေ Neurosci ။ , 28 (2008), စစ။ 8025-8033
Lacey et al ။ , 1987
MG Lacey, NB Mercury, RA မြောက်အမေရိက
Dopamine ဟာကြွက် substantia nigra zona compacta အများ၏အာရုံခံအတွက်ပိုတက်စီယမ် conduction တိုးမြှင့်ဖို့ D2 receptors အပေါ်ပြုမူ
ဂျေ Physiol ။ , 392 (1987), စစ။ 397-416
la Fleur et al ။ , 2007
အရှေ့တောင် la Fleur, LJ Vanderschuren, MC Luijendijk, BM Kloeze, ခ Tiesjema, RA သွားလေ၏
အစားအစာ - လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူနှင့်အစားအစာ - သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းအကြားတစ် ဦး အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်
int ။ ဂျေအဝလွန်ခြင်း။ (Lond), 31 (2007), စစ။ 1286-1294
Kojima နှင့် Kangawa, 2002
အမ် Kojima, K. Kangawa
Ghrelin သည်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကနေတစ်ခု orexigenic အချက်ပြမော်လီကျူး
Curr ။ Opin ။ Pharmacol ။ ,2(2002), စစ။ 665-668
PDF ဖိုင် (409 K)
Kawahara et al ။ , 2009
Y. Kawahara, အိပ်ချ် Kawahara, အက်ဖ် Kaneko, အမ် Yamada, Y. Nishi, အီး Tanaka, အေ Nishi
Peripheral အုပ်ချုပ် ghrelin အစားအစာစားသုံးမှုပြည်နယ်များပေါ် မူတည်. အဆိုပါ mesolimbic dopamine system ပေါ်တွင် bimodal သက်ရောက်မှု induces
neuroscience, 161 (2009), စစ။ 855-864
PDF ဖိုင် (913 K)
Kawahara et al ။ , 2013
Y. Kawahara, အက်ဖ် Kaneko, အမ် Yamada, Y. Kishikawa, အိပ်ချ် Kawahara, အေ Nishi
mesolimbic dopamine စနစ် ghrelin နှင့် opioid အဲဒီ receptor လမ်းကြောင်း၏စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်-အထိခိုက်မခံအပြန်အလှန်
Neuropharmacology, 67 (2013), စစ။ 395-402
PDF ဖိုင် (978 K)
ယောသပ်နှင့် Hodges, 1990
MH ယောသပ်, အိပ်ချ် Hodges
ကြွက် caudate နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အစားအစာဆုလာဘ်များနှင့် dopamine လည်ပတ်မှုနှင့်ယူရစ်အက်ဆစ်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ဖိအား in vivo voltammetry အားဖြင့်တာရှည်တာလေ့လာခဲ့သည်
ဂျေ Neurosci ။ နည်းလမ်းများ, 34 (1990), စစ။ 143-149
PDF ဖိုင် (491 K)
Jerlhag et al ။ , 2007
အီး Jerlhag, အီး Egecioglu, SL Dickson, အေ Douhan, အယ်လ် Svensson ဂျေအေအိန်ဂျယ်
tegmental ဒေသများသို့ Ghrelin အုပ်ချုပ်ရေး locomotor လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါး
စှဲလမျးသူ Biol ။ , 12 (2007), စစ။ 6-16
Jacoby နှင့်ဟင်း, 2011
SM Jacoby, PJ ဟင်း
SKF 83566 အရာဝတ္ထုတည်နေရာမှတ်ဉာဏ်တာဝန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ghrelin ၏သက်ရောက်မှု attenuates
neuroscience ။ လက်တ။ , 504 (2011), စစ။ 316-320
PDF ဖိုင် (245 K)
A. အ Inui
Ghrelin: အစာအိမ်ထဲကနေတစ် orexigenic နှင့် somatotrophic signal ကို
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ ,2(2001), စစ။ 551-560
Narita et al ။ , 2006
အမ်နာရီတာ, Y. Nagumo, အက်စ် Hashimoto, အမ်နာရီတာ, ဂျေ Khotib, အမ် Miyatake, T. Sakurai, အမ် Yanagisawa, T. Nakamachi, အက်စ် Shioda, တီဆူဇူကီး
မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexinergic စနစ်များတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု
ဂျေ Neurosci ။ , 26 (2006), စစ။ 398-405
Weinberg et al ။ , 2011
ZY Weinberg, ML Nicholson, PJ ဟင်း
ventral tegmental ofရိယာ၏ 6-Hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည် ghrelin ၏အစားအစာအားဖြည့်အပြုအမူကိုထုတ်ယူနိုင်စွမ်းကိုဖိနှိပ်
neuroscience ။ လက်တ။ , 499 (2011), စစ။ 70-73
PDF ဖိုင် (225 K)
တောရက်စ် Celis, 1988
အီး Torre, ME Celis
alpha-melanotropin သွေးဆောင်အလွန်အကျွံဖြီးလိမ်းပုံ၏ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Cholinergic ဖျန်ဖြေ: အနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများနှင့် putamen caudate
ဘဝကသိပ္ပံ။ , 42 (1988), စစ။ 1651-1657
PDF ဖိုင် (495 K)
Tobin et al ။ , 2009
အက်စ် Tobin, AH Newman က, T. Quinn, U. Shalev
ကြွက်များကိုရှာဖွေရန်ဘိန်းဖြူကိုစုပ်ယူသောအစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသော dopamine D1 ကဲ့သို့သော receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ role
int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ , 12 (2009), စစ။ 217-226
Subramaniam et al ။ , 1992
အက်စ် Subramaniam, ဗြဲ Lucky, P. McGonigle
dopamine receptors ၏ Subtype အပေါ်ရွေးချယ် agonists နှင့်အတူနာတာရှည်ကုသမှုဆိုးကျိုးများ
ဦးနှောက် Res ။ , 571 (1992), စစ။ 313-322
PDF ဖိုင် (2747 K)
Skibicka et al ။ , 2011
KP Skibicka, C. Hansson, အမ် Alvarez-Crespo, PA ဆိုပြီး Friberg, SL Dickson
Ghrelin တိုက်ရိုက်အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာပစ်မှတ်ထား
neuroscience, 180 (2011), စစ။ 129-137
PDF ဖိုင် (1685 K)
Skibicka et al ။ , 2012b
KP Skibicka, C. Hansson, အီး Egecioglu, SL Dickson
အစားအစာဆုလာဘ်အတွက် ghrelin ၏အခန်းက္ပ: sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် mesolimbic dopamine အပေါ် ghrelin ၏သက်ရောက်မှုနှင့် acetylcholine receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်
စှဲလမျးသူ Biol ။ , 17 (2012), စစ။ 95-107
Skibicka et al ။ , 2012a
KP Skibicka, RH အတစ်ခါ, C. Hansson, SL Dickson
Ghrelin အစားအစာဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ဖို့ neuropeptide Y ကို Y1 နှင့် opioid receptors နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်
ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, 153 (2012), စစ။ 1194-1205
Skibicka et al ။ , 2009
KP Skibicka, AL Alhadeff, HJ ကင်
Hindbrain cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်း GLP-1 receptors ကကမကထပြုခဲ့ hypothermia induces
ဂျေ Neurosci ။ , 29 (2009), စစ။ 6973-6981
Skibicka နှင့် Dickson, 2011
KP Skibicka, SL Dickson
Ghrelin နှင့်အစားအစာဆုလာဘ်: အလားအလာနောက်ခံအလွှာ၏ဇာတ်လမ်း
Peptides, 32 (2011), စစ။ 2265-2273
PDF ဖိုင် (664 K)
Skibicka နှင့်ကင်, 2009
KP Skibicka, HJ ကင်
Hypothalamic နှင့် hindbrain melanocortin receptors အဆိုပါနို့တိုက်ကျွေးရေး, thermogenic နှင့် melanocortins ၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအရေးယူမှုမှအထောက်အကူဖြစ်စေ
ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, 150 (2009), စစ။ 5351-5361
Shintani et al ။ , 2001
အမ် Shintani, Y. Ogawa, K. Ebihara, အမ် Aizawa-ရှင်ဇိုအာဘေး, အက်ဖ် Miyanaga, K. Takaya, T. Hayashi, G. အ Inoue, K. Hosoda, အမ် Kojima, K. Kangawa, K. Nakao
Ghrelin တစ်ခု endogenous ကြီးထွားဟော်မုန်း secretagogue, hypothalamic neuropeptide Y ကို / Y1 အဲဒီ receptor လမ်းကြောင်း၏ activation မှတဆင့် leptin အရေးယူ antagonizes တဲ့ဝတ္ထု orexigenic peptide ဖြစ်ပါသည်
ဆီးချိုရောဂါ, 50 (2001), စစ။ 227-232
Salome et al ။ , 2009
N. ရှာလုံဃ Haage, ဃ Perrissoud, အေ Moulin, အယ်လ် Demange, အီး Egecioglu ဂျေအေ Fehrentz, ဂျေ Martinez, SL Dickson
Anorexigenic နှင့်ကြွက်များတွင်ဝတ္ထု ghrelin အဲဒီ receptor ၏ electrophysiological လုပ်ရပ်များ (GHS-R1A) ရန်
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ , 612 (2009), စစ။ 167-173
PDF ဖိုင် (580 K)
Quarta et al ။ , 2009
ဃ Quarta, C. Di Francesco, အက်စ် Melotto, အယ်လ် Mangiarini, C. Heidbreder, G. အ Hedou
ghrelin ၏ system administrator shell ကိုမနျူကလိယ accumbens ၏အဓိက subdivision အတွက် extracellular dopamine တိုးပွါး
Neurochem ။ int ။ , 54 (2009), စစ။ 89-94
PDF ဖိုင် (550 K)
Plaznik et al ။ , 1989
A. အ Plaznik, R. Stefanski, ဒဗလျူ Kostowski
ကြွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ accumbens D1 နှင့် D2 receptors အကြားအပြန်အလှန်
Psychopharmacology (Berl), 99 (1989), စစ။ 558-562
Perello et al ။ , 2010
အမ် Perello, ဗြဲ Sakata, အက်စ် Birnbaum, JC Chuang, အက်စ် Osborne-လောရင့်, SA Rovinsky, ဂျေ Woloszyn, အမ် Yanagisawa, အမ် Lutter, JM Zigman
Ghrelin တစ်ခု orexin-မှီခိုထုံးစံ၌ High-အဆီအစားအစာများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုတိုးပွါး
Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 67 (2010), စစ။ 880-886
PDF ဖိုင် (769 K)
Pei et al ။ , 2010
အယ်လ် pei, အက်စ်လီ, အမ်ဝမ်, အမ် Diwan, အိပ်ချ် Anisman, PJ ဖလက်ချာ, ဖြစ်မှု Nobrega, အက်ဖ်လျူ
အဆိုပါ dopamine D1-D2 အဲဒီ receptor ရှုပ်ထွေး Uncoupling လက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှုပြုပြင်
နတ်။ Med ။ , 16 (2010), စစ။ 1393-1395
Overduin et al ။ , 2012
ဂျေ Overduin, DP Figlewicz, ဂျေ Bennett က-ဂျေး, အက်စ် Kittleson, DE Cummings က
Ghrelin ကိုစားဖို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွါး, ဒါပေမယ့်အစားအသောက်အာခေါင်ပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး
နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol ။ , 303 (2012), စစ။ R259-R269
Olszewski et al ။ , 2003
PK Olszewski, ဃလီ, MK တော်ကကျေးဇူး, CJ Billington, CM Kotz, AS Levine
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွင်း ghrelin သရုပ်ဆောင်များ၏ orexigenic သက်ရောက်မှု၏အာရုံကြောအခြေခံ
Peptides, 24 (2003), စစ။ 597-602
PDF ဖိုင် (158 K)
Nowend et al ။ , 2001
KL Nowend, အမ် Arizzi, BB Carlson, JD Salamone
နျူကလိယအတွက် D1 သို့မဟုတ် D2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအဓိကသို့မဟုတ် dorsomedial shell ကို accumbens စားစရာဘို့နှိပ်လီဗာဖိနှိပ်ပေမယ် Chow စားသုံးမှုအတွက်တိုး compensatory မှဦးဆောင်
Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ , 69 (2001), စစ။ 373-382
PDF ဖိုင် (195 K)
Weissenborn et al ။ , 1996
R. Weissenborn, V. Deroche, gf Koob, အက်ဖ် Weiss
တစ်ဦးကိုကင်း-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တုံ့ပြန်ကင်း-သွေးဆောင်အော်ပရေတာပေါ် dopamine agonists နှင့်ရန်၏ဆိုးကျိုးများ
Psychopharmacology (Berl), 126 (1996), စစ။ 311-322
Zigman et al ။ , 2006
JM Zigman, je ဂျုံးစ်, အီး Lee က, သမဝါယမ Saper, JK Elmquist
ကြွက်များတွင် ghrelin အဲဒီ receptor mRNA ၏ expression နဲ့ mouse ကိုဦးနှောက်
ဂျေ Comp ။ Neurol ။ , 494 (2006), စစ။ 528-548
Wren et al ။ , 2000
လေး Wren, CJ အသေးစား, HL ရပ်ကွက်, KG Murphy က CL Dakin, အက်စ် Taheri, AR ကနေဒီ, GH Roberts သည်, DG မော်ဂန်, MA Ghatei, SR Bloom
အဆိုပါဝတ္ထု hypothalamic peptide ghrelin အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်
ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, 141 (2000), စစ။ 4325-4328
D-1 dopamine အဲဒီ receptor ဆွနျူကလိယ၏တားစီး D-2 အဲဒီ receptor agonist နေဖြင့်အာရုံခံ accumbens ဖွ
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ , 135 (1987), စစ။ 101-105
PDF ဖိုင် (342 K)
သက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာ။ Endocrinology ဌာန၊ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဌာန၊ Gothenburg တက္ကသိုလ်မှ Sahlgrenska အကယ်ဒမီ၊ Medicinaregatan 11, PO Box 434, SE-405 30 Gothenburg, Sweden ။ ဖုန်းနံပါတ် +46 31 786 3818 (ရုံး)၊ ဖက်စ်: +46 31 786 3512 ။
မူပိုင်ခွင့်© 2013 အာဏာပိုင်တွေ။ Elsevier, Ltd. ထုတ်ဝေသည်